Public Health in Myanmar: July 2011
အထူးတကာ့ အထူးဆုံး၊ အကောင်းတကာ့ အကောင်ဆုံး ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်မှု
ကိုယ်ဝန်တိုင်းကို အထူး ဂရုစိုက်သင့်တယ်။ တကယ်လို့ ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်ကနေ တခုခု ထူးလာရင်၊ ဒါမှမဟုတ် မိခင်လောင်းမှာ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းနေရင် အထူး-စပါယ်ရှယ် ဂရုစိုက်ရလိမ့်မယ်။
ဒီသဘောကို အခြေပြုပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု Rhode Island မှာရှိတဲ့ Women & Infants ဆေးရုံကနေ အဲလို High-risk pregnancies အန္တရာယ်ရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေနဲ့ အထဲက ကလေးအတွက် လိုလေသေးမရှိ ပြည့်စုံတဲ့ ဌာနတခု ပဌမဆုံး တီထွင် ဖွင့်လှစ် လိုက်ပါတယ်။ အရင်က ရှိထားတဲ့ Maternal-Fetal Medicine and Obstetric ကိုယ်ဝန်ဆောင်-သန္ဓေသားနဲ့ သားဖွါး ဌာန နဲ့ Consultative Medicine at Women & Infants Hospital မိခင်နဲ့ မွေးစကလေး အတိုင်ပင်ခံ-ဆေးရုံ အပြင် Warren Alpert Medical School of Brown University ဘရောင်း-တက္ကသိုလ်-ဝါရင်း-အဲလပတ် ဆေးပညာသင်ကျောင်းတွေကို စုစည်းလိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ အထူးကုဆေးပညာတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး မိခင်ရော ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံး ရလဒ်တွေ ရစေအောင် လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်။
"ဒါဟာ တခြားနဲ့ မယှဉ်နိုင်တဲ့ စိတ်ချသေခြာမှုကို ရစေမဲ့ စုဝေးမှုကြီးကနေ အဲဒီလို အန္တရာယ်ရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အသေးဆုံး လူနာကလေးတွေ အတွက် လူနာရော ဆရာဝန်တွေအတွက်ပါ ထိုက်တန်တဲ့ ညွှန်ပြဦးစီးမှုတွေ ရစေမှာပါ" လို့ Raymond O. Powrie, MD က ပြောလိုက်တယ်။ သူဟာ ဆေးပညာဆောင် အကြီးအကဲ နဲ့ Quality and Clinical Effectiveness at Women & Infants Hospital ရဲ့ အကြီးတန်း ဒု-ဥက္ကဌဖြစ်ပြီး၊ စုဝေးမှု ဌာနသစ်ရဲ့ တွဲဖက် ညှိနှိုင်းရေးမှူးလဲ ဖြစ်တယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကနေ တခြား ကွန်မြူနတီ သားဖွါးပေးသူတွေ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးသူတွေ၊ ဝမ်းဆွဲ-သူနာပြုတွေနဲ့ ဆေးပညာ၊ သားဖွါးပညာ၊ မွေးစကလေး-ကျန်းမာရေး၊ မျိုးဗီဇရေးရာတွေကို မမွေးခင်၊ မွေးနေတုံးနဲ့ မွေးပြီး အခြေအနေတွေ အားလုံးမှာ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Division of Maternal-Fetal Medicine ဌာနက ဒါရိုက်တာ နဲ့ အစီအစဉ်သစ်ရဲ့ ညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ Katharine D. Wenstrom, MA, MD က "ကျမတို့ ရည်ရွယ်ချက်က (ကွန်မြူနတီ) အခြေပြု သားဖွါးပေးသူတွေကို အကောင်းဆုံးအဆင့် စောင့်ရှောက်မှုပေးဘို့ပါ" လို့ ပြောတယ်။ "စုစည်းမှုကြီးဟာ အကောင်းဆုံး ဦးနှောက်တွေ လက်တွဲ လုပ်ကြပြီး အကောင်းဆုံး ရလဒ်တွေ ရစေဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။"
အစုအစည်းကြီးထဲမှာ Maternal-fetal medicine မိခင်-သန္ဓေ-ဆေးပညာ၊ Obstetric internal medicine မီးဖွါးဆေးပညာ၊ Internal Medicine ဆေးပညာ၊ Obstetric Anesthesiology မီးဖွါး-မေ့ဆေးပညာ၊ Cardiology နှလုံး-အထူးကု၊ Pulmonology အဆုပ်-အထူးကု၊ Hematology သွေး-အထူးကု၊ Gastroenterology အစာလမ်း-အထူးကု၊ Rheumatology လေးဘက်နာ-အထူးကု၊ Endocrinology ဟော်မုန်း-အထူးကု၊ Infectious disease ကူးစက်ရောဂါ-အထူးကု၊ Clinical genetics မျိုးဗီဇ-အထူးကု၊ Laboratory medicine ဓါတ်ခွဲခန်း-ဆေးပညာ၊ Radiology ဓါတ်မှန်၊ Nursing သူနာပြု၊ Pharmacy ဆေးဝါး၊ နဲ့ Respiratory therapy အသက်ရှူ-ကုသရေးတွေ ပါဝင်တယ်။ တခြားဟာတွေလဲ ပါပါသေးတယ်။
Prenatal Diagnosis Center အပြင်လူနာဌာနကနေ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်နဲ့ အထဲကကလေးအတွက် ရှုတ်ထွေး ဆန်းပြားတဲ့ ရောဂါ-ရှာဖွေ-စစ်ဆေးရေး-အကဲဖြတ်ရေးတွေ လုပ်ပေးတယ်။
Diagnostic services ရောဂါရှာဖွေရေးတွေထဲက Ultrasound exams (အာလ်ထွာဆောင်း)၊ Genetic amniocentesis ရေမြွာရည်စုပ်-မျိုးဗီဇ စစ်ဆေးမှု၊ Chorionic villus sampling အချင်း-နမူနာယူတာ၊ Division of Maternal-Fetal Medicine ကနေ လုပ်ပေးမယ်။ လူနာရဲ့ သီးသန့် ဆရာဝန်ကနေ ညှိနှိုင်းပေးတာတွေ လုပ်ပေးမှာပါ။
ဒီအထဲက Division of Maternal-Fetal Medicine faculty ဟာ Women & Infants and Hasbro Children's/Rhode Island hospital ရယ် Tufts Medical Center in Boston ရယ်နဲ့ စပ်တူဖြစ်နေတဲ့ Women & Infants and the Fetal Treatment Program နဲ့ပါ တွဲဆက်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Fetal Treatment Program မွေးစကလေး ကုသရေးဌာနကနေ အသက်ကို အန္တရာယ် ပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါအခြေအနေ မှန်သမျှကို အကောင်းဆုံး-နောက်ဆုံးပေါ် နည်းတွေနဲ့ ကုသပေးမှာ ဖြစ်တယ်။
Diabetes in Pregnancy Program ကိုယ်ဝန်-ဆီးချို အစီအစဉ်ကနေ အမျိုးအစား ၁ ရော ၂ ရော၊ Gestational Diabetes ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှ ဆီးချို ရှိလာရသူတွေ အတွက်ပါ အမျိုးမျိုးသော ဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေ ရစေပါမယ်။
Genetic testing and counseling မျိုးဗီဇ စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ တိုင်ပင်မှုကို ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသူတွေအတွက် ကိုယ်ဝန် မယူခင်ကာလကတည်း ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ပါတယ်။ လူနာဟာ အသက်ကြီးနေလို့၊ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုထဲမှာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ် မျိုးဗီဇ ချို့ယွင်းတာ ရှိသူဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် စမ်းတော့ သံသယရှိသူ ဖြစ်ဖြစ် မျိုးဗီဇဌာနကို လွှတ်ပေးလိမ့်မယ်။ ဒီလို စစ်ဆေးမှုတွေက အများဆုံး သေခြာတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်ဝန်မှာ တခုခုရှိနေတာတွေ့ရင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု အကူအညီပေးပြီး ပြဿနာကိုရှင်းပြတာ၊ နောက်ပြီး ဖြစ်နိုင်ရင် မမွေးခင် ကုသပေးတာတွေ လုပ်ပေးမယ်။ ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ Genetic counselors မျိုးဗီဇ-ကောင်ဆယ်လာ နဲ့ မျိုးဗီဇ နဲ့ မိခင်-သန္ဓေသား-ဆေးပညာ အထူးကု ၂ ဦးတို့ ပါတယ်။ ဒါမျိုးဆိုတာ ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာတောင် ခပ်ရှားရှားသာ ရှိတာပါ။
ဒီပို့စ်တွင် ကျွန်မ အရင်တင်ခဲ့သည့် အာဟာရနှင့်ပတ်သက်သည့် ပို့စ်အဟောင်းများထဲမှ လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ပြန်လည် ရွေးထုတ် ကောက်နှုတ်ပြီး အသက်သတ်လွတ် စားသူများအတွက် စားသုံးရန် လိုအပ်သော အစားအစာများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ သီးသန့်အကြံပြု ဖေါ်ပြထားပါသည်။
လူအပါအ၀င် လူအပါအ၀င် သက်ရှိများ၏ ခန္ဓာကိုယ် သည် နေ့စဉ် မြင်တွေ့ နေရသော သက်မဲ့ ရုပ်ဝထ္ထု ပစ္စည်းများကဲ့သို့ပင် ဓါတုဗေဒ ဆိုင်ရာ ဓါတ်ပေါင်း များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား ပါသည်။ ထို ဓါတ်ပေါင်း များကို နေ့စဉ် စားသုံး နေသော အစားအသောက်နှင့် ရှူရှိုက်သော လေမှ တဆင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ လက်ခံ ရရှိ ပါသည်။ လူတယောက် ပုံမှန် အတိုင်း ကျန်းမာစွာ ရှင်သန် နိုင်ရန် အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစွာ မွေးမြူနိုင်ရန် သင့်တင့် မျှတသော အာဟာရ အား နေ့စဉ် စားသုံး ပေးရန် လိုအပ် ပါသည်။
ခန္ဓာ ကိုယ် အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပြီး နေ့စဉ် စားသုံး သင့်သော အာဟာရ များကို Micronutrients ဟုခေါ်သော ဗိုက်တာမင်နှင့် သတ္တုဓါတ်များပါဝင်သည့် အသေးစား အာဟာရ နှင့် Macronutrient ဟုခေါ်သော ကစီဓါတ်၊ အဆီဓါတ်၊ အသားဓါတ် နှင့် ရေပါဝင်သည့် အကြီးစား အာဟာရ ဟူ၍ နှစ်မျိုး တွေ့ရပါသည်။ ထိုအာဟာရ နှစ်မျိုးထဲတွင် ပါဝင်နေသည့် အစား အစာ များအား လုံလောက်စွာ မစားသုံးပါက အာဟာရ ချို့တဲ့နိုင်သလို လွန်ကဲစွာစားသုံးပါကလည်း နောက်ဆက်တွဲ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ပြဿနာများစွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အာဟာရကို လုံလောက်မျှတအောင် စားသုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။
အသက်သတ်လွတ်စားသုံး သူများသည် စားသုံးသင့်သည့် အာဟာရကို လုံလောက်စွာ မစားသုံးပါက အသားဓါတ်ချို့တဲ့နိုင်ခြင်း၊ တခြား ဗီတာမင်ဓါတ်များလည်း ချို့တဲ့နိုင်ခြင်း စသည့် အားနည်းချက် ရှိသလို ဟင်းသီးသင်းရွက်ကို အဓိကထား စားသုံးသောကြောင့် လုံလောက်စွာ စားသုံးပါက သာမန်လူများထက် အမျှင်ဓါတ်လုံလောက်သည့်အတွက် အားသာချက်များကိုလည်း ရရှိထားပါသည်။ အစာအာဟာရနှင့်ပတ်သက်၍ အသက်သတ်လွတ် စားသူများအတွက် အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်များကို ယှဉ်တွဲတင်ပြပါမည်။
အမျှင်ဓါတ်သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထဲမှာ အများဆုံးပါရှိပါသည်။ အမျှင်ဓါတ် ပိုမိုစားသုံးသူသည် အမျှင်ဓါတ် အစားနည်းသူထက် များစွာအသက်ရှည်ပြီး ကျန်းမာသည်။ အကယ်၍ အသက်သတ်လွတ်စားသုံးသူများသည် လုံလောက်သော အာဟာရကို နေ့စဉ်စားသုံးနိုင်ပါက အသားငါး စားသူများထက် ပိုပြီး ကျန်းမာအသက်ရှည်စွာ နေထိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် အသီးနှံများတွင် ပါဝင်သော အမျှင်ဓါတ်သည် ခန္ဒာကိုယ်အတွက် စွမ်းအင်ဖြစ်စေသည့် ဂလူးကို့စ်ဖြစ်အောင် အစာခြေ၍ မရနိုင် သောကြောင့် ၎င်းကို ဆဲလ်များမှ ဂလူးကို့စ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ၍ အသုံး ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှ ရရှိသော အမျှင်များသည် အူနံရံရှိ ဘက်တီးရီးယား များကို သယ်ဆောင်ပြီး မစင်အဖြစ် ပုံမှန် စွန့်ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ၀မ်းကို ပုံမှန် သွားစေပြီး အူလမ်းကြောင်းတွင် ဖြစ်တတ်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်စေခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အား အကျိုးပြု ပါသည်။
ထို့အပြင် ထိုအမျှင်များသည် ခန္ဓာကိုယ်အား စွမ်းအင် အဖြစ်နှင့် အကျိုး မပြုနိုင် သော်လည်း စားသုံးလိုက်သော အာဟာရများထဲရှိ ဂလူးကို့စ်ကို သွေးထဲ ပုံအော ရောက်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်ပြီး ဆဲလ်မှ ဂလူးကို့စ်ကို ဖြည်းဖြည်းနှင့် မှန်မှန် စုပ်ယူစေ၍ သွေးထဲ သကြားဓါတ် ပမာဏကို အမြဲတမ်း ပုံမှန် ဖြစ်နေအောင် ထိန်းညှိ ပေးသည်။ ထို့အပြင် နှလုံးနှင့် သွေးကြော များအား ဒုက္ခပေးနိုင်သည့် ကော်လက်စထရောလ် ပမာဏကို လျော့နည်းစေခြင်း၊ ၀မ်း ပုံမှန် သွားပြီး အူမကြီး အား ဘတ်တီးရီးယား ဒုက္ခ ပေးခြင်း၊ ကင်ဆာဖြစ်ခြင်းဖြင့် နှလုံး၊ ဆီးချို၊ အူမကြီးကင်ဆာ စသည့် အသက်ကြီးလာရင် ဖြစ်လာနိုင်သော ရောဂါပေါင်း များစွာကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင် အမျှင်ဓါတ်အပြင် ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓါတ်များလည်း များစွာ ပါဝင်ပြီး ဘက်တီးရီးယားနှင့်အတူ မစင်အဖြစ် မစွန့်ထုတ်မီ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ထိုသတ္တုဓါတ်များကို အစာလမ်းကြောင်းတလျှောက်ရှိ အူနံရံက စုပ်ယူပါသည်။ ဤနည်းဖြင့် အမျှင် ( Fibre) သည် စွမ်းအင် ဖြစ်စေသည့် ဂလူးကို့စ်ကို မထုတ်ပေးသော်လည်း ခန္ဓာကိုယ်နှင့် အစာ လမ်းကြောင်းကို များစွာ အကျိုး ပြုပြီး ရောဂါပေါင်း များစွာကို ကာကွယ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျှင်ဓါတ်ကို နေ့စဉ်များများ စားသုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အစာလမ်းကြောင်း ပြဿနာမရှိသူများအနေဖြင့် အချိုအရသာ မရှိသည့် အသီးနှံနှင့် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များကို ဆန္ဒရှိသလို ကြိုက်သလောက် များများ စားသုံး နိုင်ပြီး ချိုသည့် အသီးနှံများကိုမူ တမျိုးစီ သို့မဟုတ် Fruit Salad အဖြစ် တနေ့ နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် သုံးကြိမ်ထက် ပိုမစားသင့်ပါ။
အသားဓါတ် Protein သည် ခန္ဓာကိုယ်၏ လုပ်ငန်းစဉ် အတော် များများကို အထောက်အကူ ပြုပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဆဲလ်များနှင့် တစ်ရှူး များ၏ လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည့် သွေးထဲနှင့် တစ်ရှူးထဲရှိ အရည် ပမာဏကို မျှတအောင် ထိန်းချုပ် ပေးခြင်း၊ သွေးထဲ ဟိုက်ဒရိုဂျင် စုစည်းမှု (pH) ကို မျှတ အောင် လုပ်ပေးရန် အင်ဇိုင်းနှင့် ဟော်မုန်းများ ပုံမှန် အလုပ်လုပ် နိုင်အောင် အကူအညီ ပေးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း ရောဂါပိုးများ နှောင့်ယှက်မှု ကို ကာကွယ် ပေးခြင်း၊ အာဟာရ ကို ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ သယ်ယူ ပို့ဆောင် ရာတွင် အကူအညီ ပေးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း အဓိက လောင်စာ ဖြစ်သည့် ဂလူးကို့စ်ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြတ်လတ် သွားပါက အသားဓါတ်မှ ဂလူးကို့စ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ၍ အသက် မဆုံးရှုံးအောင် ထိန်းထား ပေးခြင်း စသည့် အရေးပါသည့် လုပ်ငန်း များစွာဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အား အထောက်အကူ ပြုပါသည်။
အသားဓါတ် ကို ဆဲလ်ကလပ်စည်းများ အတွင်းရှိ DNA ခေါ် မျိုးရိုးဗီဇကို သယ်ဆောင်ပေးသည့် အချဉ်ဓါတ်တမျိုးမှတဆင့် အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲ၍ အမီနို အက်စစ် ကွင်းဆက်များ အဖြစ် တွေ့ရပါသည်။ အသားဓါတ်တွင် အမီနိုအက်စစ် အမျိုးအစား ၂၀ ရှိပြီး အရိုးတွယ် ကြွက်သားများ ကို အသုံးပြု၍ လိုအပ်သော အသားဓါတ် အများစုကို ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှာ ပင် ထုတ်လုပ် ပါသည်။ သို့သော်လည်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် ထုတ်လုပ်၍ မရနိုင်သော မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည့် အမီနို အက်စစ် တချို့ ရှိနေ သောကြောင့် အသားဓါတ်ကို နေ့စဉ် အနည်းငယ်စီ ဖြည့်စွက်စားသုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။
လူတယောက်အတွက် လုံလောက်သော အသားဓာတ်ကို အသား၊ ငါး၊ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ၊ နို့ စသည့် တိရစ္ဆာန်ထွက် အစားအစာများကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ရနိုင်သကဲ့သို့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ အခွံမာသီးများ စသည့် အပင်ထွက် အစားအစာများကို လုံလောက်စွာ စားသုံးခြင်းဖြင့်လည်း လူတယောက်အတွက် လုံလောက်သော အသားဓာတ်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ အားနည်းချက်မှာ တိရိစ္ဆာန် မှ ရသော အသားဓါတ်တွင် အသားတမျိုးတည်းမှ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အမီနိုအက်စစ် အားလုံး ပါဝင် နိုင်သော်လည်း အပင်မှ ရရှိသော အသားဓါတ်တွင် အမီနို အက်စစ် တခု (သို့) တခုထက် ပို၍ လိုနေ တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသက်သတ်လွတ် စားနေသူများ သည်နွားနို့စသည့် တိရစ္ဆာန်ထွက် နို့မသောက်သူများ ဖြစ်ပါက အမီနိုအက်စစ် အားလုံး ပါစေရန် အသားဓါတ် ပါဝင်သည့် အပင်ထွက် အစားအစာ အမျိုးမျိုး ပါဝင်အောင် စားသင့်ပါသည်။ အသားဓါတ်ပါသော အပင်ထွက်အစားအစာ တခုတည်းစား၍ အသားဓါတ်ထဲတွင် ပါဝင်သော Amino acid အကုန်လုံးပါဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ပဲဟင်းတခွက်တည်း ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လုံလောက်သော အသားဓါတ်ကို ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။ တမျိုးတည်းကိုသာ စားသုံးပါက အသက်သတ်လွတ်စားခြင်းအတွက် အားနည်းချက်အဖြစ် နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို ဖြစ်လာစေနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ပဲတမျိုးတည်းကို နေ့စဉ် ဆက်တိုက် စားမည့်အစား ပဲပုပ်ပဲ၊ ကျောက်ကပ်ပုံပဲ၊ မြေပဲ၊ ပဲဝါခြမ်း၊ နှမ်းနှင့် တခြားအခွံမာ စေ့များ၊ ပဲပြား တို့ဖူး စသည်တို့ကို တပတ်အတွင်းတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးစား နှစ်ခုထက် ပို၍ ပါဝင်အောင် တလှည့်စီ စားသင့် ပါသည်။ စားသုံးသည့် အသားဓါတ်ထဲတွင် အမီနိုအက်စစ် အကုန်လုံး ပါဝင်အောင် မစားနိုင်ပါက အသားဓါတ် ချို့တဲ့နိုင်ပြီး အသားဓါတ် ချို့တဲ့ခြင်း သည် တခြားအာဟာရဓါတ်အားလုံး ချို့တဲ့ခြင်း၏ လမ်းစဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အသက်သတ်လွတ်စားသူသည် အသားဓာတ်ပါသော အသီးအရွက် နှစ်မျိုးနှင့် နှစ်မျိုးထက်ပိုပြီး စားသုံးပေးနိုင်ပါက နေ့စဉ် အသားစားသူနှင့် အသားဓာတ် အာဟာရ ရရှိမှုတွင် ဘာမှ မခြားပါ။ အသားစားသူများထက် အားသာသည့်အချက်မှာ တိရစ္ဆာန်မှ ရရှိသည့် အသားဓာတ်ကို လိုသည်ထက် ပို၍ စားသုံးပါက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ များစွာ ရှိသော်လည်း အပင်မှရသည့် အသားဓာတ်ကိုမူ အစာလမ်းကြောင်း ပြဿနာနှင့် အစာ မတည့်သည့် ပြဿနာ မရှိပါက ဆန္ဒရှိသလောက် ကြိုက်သလို များများ စားသုံးနိုင်ပါသည်။ အပင်မှရသည့် အသားဓါတ်သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အောက်စီဂျင်ပိုရသောကြောင့် အသားစားသူထက် လူကိုပို၍လန်းဆန်းစေသဖြင့် လိုသည်ထက် ပိုစားမိသည်ဟူ၍ မရှိဘဲ အမျှင်များများစားလေ ဘက်တီးရီးယားများကို ပိုမိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီး အစာလမ်းကြောင်းကို ပို၍ ကျန်းမာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပါသည်။
အပင်ထွက် အစားအစာများကို တခုထက်ပိုစားပါက အသားဓါတ်နှင့် တခြား ဗီတာမင်ဓါတ်၊ သတ္တုဓါတ်များကို လုံလောက်စွာ ရနိုင်သော်လည်း ဗီတာမင် B12 ကိုမူ အပင်ထွက် အာဟာရများမှ ရနိုင်သည့် အထောက်အထားကို အာဟာရဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရှင်များ မတွေ့ရသေးကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။ ဗီတာမင် B12 သည် ဆဲလ်များ ပုံမှန် ကြီးထွားမှု၊ အပေါ်ယံ ဆဲလ်များ ထုတ်လုပ်မှု၊ သွေးနီဥ ထုတ်လုပ်မှု၊ အာရုံကြောအကာလွှာ ထိန်းသိမ်းမှု၊ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆဲလ်များ ထိန်းသိမ်းမှု နှင့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောစနစ်၏ ပုံမှန် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ထိန်းသိမ်းမှု အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းကို တိရစ္ဆာန်ထွက် အစားအစာ များမှသာ ရရှိနိုင်ပြီး ဟင်းသီး ဟင်းရွက်၊ အသီးနှံ များ အပါအ၀င် တခြားမည်သည့် အပင်ထွက် အစားအစာ များမှ မရနိုင်ကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။ ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့ပါက သွေးအားနည်း ရောဂါတမျိုး ( Pernicious Anaemia) ရနိုင်ပြီး နာ့ဗ်ကြော စနစ် ပျက်စီး နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ အသက်သတ်လွတ်စားသူသည် ကြက်ဥ (သို့) နွားနို့ကဲ့သို့ တိရစ္ဆာန်ထွက် နို့များကို မသောက်သုံးသူများ ဖြစ်ပါက ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့မှု ရှိမရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးသင့်ပြီး ရှိပါက ဆေးဝါးဆောင်ထားသင့်ပါသည်။ ကြက်ဥ စားသူများ (သို့) နွားနို့သောက်သူများအတွက် မလိုအပ်ပါ။
ကယ်လစီယံကို အသီးအရွက်များတွင် ရနိုင်သော်လည်း သူ့အတွက် သီးသန့်ပုံမှန်စားသုံးမှု မရှိပါက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လုံလောက်သည့် ပမာဏကို ရရန်မလွယ်ပေ။ ထို့ကြောင့် နေ့စဉ် နွားနို့ (သို့) ပဲနို့ နှစ်ခွက်ခန့် သောက်သင့်ပါသည်။
သကြား၊ ဆား၊ ဘီယာ၊ အရက်၊ အချိုရည် (Soft drink)၊ ဘီစကစ်မုန့်အပါအ၀င် သရေစာ အချိုစာများအားလုံး၊ ပေါင်မုန့်တွင် သုတ်သည့် ထောပတ်နှင့် Jam များအားလုံးသည် ကျန်းမာရေးအတွက် မလိုအပ်ပဲ အရသာအတွက် အပျော်စားသည့် အပိုစာများသာ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုအစားအစာများကို မစားသုံးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် မည်သည့် အကျိုးကျေးဇူးမှ ဆုတ်ယုတ်သွားရန် မရှိပါ။ အရသာအတွက်သာ ဖြစ်သည့် အစားအစာများ ဖြစ်၍ စားသုံးပါက အတတ်နိုင်ဆုံး နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင်ဆင်ခြင် စားသုံးသင့်သော အစားအစာများ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို မစားသုံးပဲ နေနိုင်က စားသုံးသူများထက် ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုအကျိုးရှိပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့် အသက်သတ်လွတ်စားသူများအတွက် အသားဓါတ်ကို အပင်ထွက် အစားအစာများမှ လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်သော်လည်း ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် ဗီတာမင် B12 ကိုမူ တိရိစ္ဆာန်ထွက် အစားအစာမှသာ ရရှိနိုင်သောကြောင့် တိရိစ္ဆာန်ထွက် အသားဓါတ်လုံးဝ မစားသုံးသူများသည် ဖြည့်စွက် Vitmin B12 ကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ လူတိုင်း လူတိုင်း တနေ့ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက် အစိမ်းအကျက် သုံးလေးမျိုးနှင့် အသီးနှံ နှစ်မျိုးခန့် စားသုံးမှ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လုံလောက်သော အာဟာရကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ အသက်သတ်လွတ် စားသူများအနေဖြင့်မူ ၎င်းပမာဏထက်ပိုစားသုံးသင့်ပြီး အစာလမ်းကြောင်း ပြဿနာ မရှိပါက ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလောက် စားသုံးနိုင်ပါသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို များများ စားသုံးခြင်းဖြင့် ရောဂါပေါင်းများစွာကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး မည်သူမဆို လူ့သက်တမ်းမှာ ကျန်းမာ အသက်ရှည်စွာ အသက်ရှင် နေထိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။
လူတိုင်းလူတိုင်း အစာအာဟာရကို မျှတအောင် စားသုံးပြီး လူ့သက်တမ်းကို ကျန်းမာစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။
အပေါ်မှာ ရေးထားတာတွေက အရင်ပို့စ်ဟောင်းတွေက ပြန်ကောက်နုတ်ထားတာကို အသက်သတ်လွတ်နဲ့ ပတ်သက်တာနည်းနည်း ပြန်ပေါင်းစပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်သတ်လွတ်နဲ့ မဆိုင်ဘဲ ပုံမှန် လူတွေအတွက် အာဟာရကို ဒီထက်ပို အသေးစိတ်သိလိုရင် Nutrition label အာက်က Malnutrition အပါအ၀င် ကျန်းမာစွာ အသက်ရှင်ရန် နေ့စဉ်စားသုံးရန် လိုအပ်သည့် အစာအာရ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပို့စ် သုံးခုကို သွားလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အထက်ဖေါ်ပြပါ ပို့စ်ပါ အကြောင်းအရာအရ အသက်သတ်လွတ် စားသူများဟာ ပဲဟင်းတခွက်တည်း (သို့) ကန်ဇွန်းရွက်ကြော် တခွက်တည်းနဲ့ လုံလောက်တဲ့ အာဟာရကို ရရှိမှာ မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ တို့စရာကြိုက်တတ်သူ ဖြစ်ရင် ဟင်းချက်ဖို့ အချိန်မရရင်တောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို စုံအောင် တို့စားသင့်ပါတယ်။ သခွားသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးတို့လို အသီးတွေကို ဘာမှ ချက်ပြုတ်စရာမလိုဘဲ လွယ်လွယ်စားလို့ရတဲ့ အသီးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အောက်ကအစားအစာပုံတွေက ကျွန်မ မကြာခဏ ချက်စားတတ်တဲ့ အသက်သတ်လွတ်စားသူများ ချက်ပြုတ်စားသောက်ဖို့ အကြံပြုတဲ့ အစားအစာ တချို့ဖြစ်တယ်။ ဒီအထဲမှ ဟင်းအကုန်လုံးကို နေ့တိုင်း ချက်စားဖို့မလိုပါဘူး။ နေ့စဉ် အာဟာရစုံအောင် ရောင်စုံဟင်းသီးဟင်းရွက် နှစ်မျိုးသုံးမျိုးခန့် ပါတဲ့ဟင်း နှစ်ခွက်ခန့် ချက်စားရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရ လုံလောက်နိုင်ပါတယ်။
(၁) အသီးအရွက်ကြော် - ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ဂေါ်ဖီပန်းအစိမ်း၊ ပဲသီး၊ ကျောက်ကပ်ပုံပဲပြုတ် တို့ကို အစိမ်းကြော်ကြော်သလို ရောကြော်ထားတယ် (အသီးအရွက် လေးမျိုး)
(၂) တို့ဖူးနှင့် ခရမ်းချဉ်သီးသုပ် - တို့ဖူး (ပဲပြားကြော်)၊ ခရမ်းချဉ်သီးတို့ကို ကြက်သွန်စိမ်း၊ ငရုပ်သီးစိမ်းပါးပါးလှီးထည့်ပြီး၊ နံနံပင်အုပ်၊ ငရုပ်ဆီထည့်ကာ သုပ်ထားပါတယ် (အသီးအရွက် လေးမျိုး)
(၃) ဟင်းသီးဟင်းရွက်စုံ ဟင်း - ပဲပြား၊ အာလူး၊ မုန်လာဥအနီ၊ Chick pea၊ ခရမ်းချဉ်သီး တို့ကို မဆာလာနဲ့ ဟင်းလေးချက်ထားတယ်။ (အသီးအရွက် ငါးမျိုး)
(၄) သနပ်စုံ - ဒါကတော့ ကျွန်မတို့ တောင်ပိုင်းက လုပ်စားတဲ့ အစားအစာ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ဂေါ်ဖီပန်းအစိမ်း၊ ပဲတီပင်တို့ကို ရှာလကာရည်တမျိုးမျိုးနဲ့ ပြုတ်ပြီး ကျက်ရင် ကြက်သွန်နီကို မိမိကြိုက်တဲ့အရွယ်နဲ့ ပုံစံ စိတ်ပြီး ဆီသတ်၊ ကြက်သွန်ကို မိမိလိုတဲ့ အတိုင်းအတာထိ ကျက်ရင် အရောင်တင်မုန့်ထည့်ချင်ရင်ထည့်ပြီး အကုန်လုံးကို ရောမွှေထားတယ်။ အချည်လိုနေသေးရင် ဒီချိန်မှာဖြစ်စေ ဆီသတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်စေ ထည့်နိုင်ပါတယ်။ အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် နှမ်းလှော်ကို ဖြူးပြီး စားတယ်။ ကျွန်မတို့ခေါ်တာ သနပ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ငှက်ပျောဖူး၊။ ပိန္နဲသီးအနု၊ ဇရစ်ရိုး၊ ခရမ်းမဲသီးတို့ကိုလည်း တခုစီဖြစ်စေ ရောပြီး ဖြစ်စေ ဒီအတိုင်း လုပ်စားလို့ရပါတယ်။ (ဟင်းသီးဟင်းရွက် သုံးလေးမျိုး)
(၅) ပဲငပိ ခရမ်းချဉ်သီးချက်နဲ့ တို့စရာ - (သခွားသီးနဲံ့ ဆလတ်ရွက်က အစိမ်း၊ ကညွတ်ပင်နဲ့ ပဲသီးကအကျက်) မိမိကြိုက်ရာ တို့စရာကို တို့နိုင်ပါတယ်။ ရှမ်းပဲပုပ်ကိုလည်း ငပိကို လုပ်စားတဲ့နည်းအတိုင်း အကြော်၊ အချက်၊ အထောင်း၊ အသုပ် အကုန်လုပ်စားလို့ရပြီး မိမိကြိုက်ရာ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အစိမ်း၊အကျက်နဲ့ တို့နိုင်ပါတယ်။
(၆) ဟင်းချို - မှိုအမျိုးမျိုး၊ တို့ဖူးနဲ့ မုန်ညှင်းရွက် ဟင်းချို ငရုပ်ကောင်းမှုန့်ဖြူးထားတယ်။ မှိုတမျိုးတည်းနဲ့ တခြားမိမိနှစ်သက်ရာ အသီးအရွက်တွေနဲ့လည်း ချက်သောက်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မ မကြာခဏ တို့လေ့ရှိတဲ့ တို့စရာတွေ ( ခရမ်းကြွပ်သီးနဲ့ သခွားသီးက အစိမ်း၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ဂေါ်ဖီပန်းအစိမ်းနဲ့ ကညွတ်ပင်က အကျက်။
လိမ္မော်သီး (နှစ်မျိုး)၊ သခွားမွှေးသီး၊ စပျစ်သီး နေ့စဉ် မိမိနှစ်သက်ရာ အသီးနှစ်မျိုး စားသင့်ပါတယ်။
Posted by Nge Naing0comments
Bartholin's cyst အကြောင်း ပြောပြပါလား။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ ဘယ်လို ကုသရတာလဲနဲ့ ခွဲစိပ်ကုသမှ ပျောက်ကင်းတဲ့ ရောဂါလား။ ဒီကနေတဆင့် အမြစ်တွယ်ပြီး ကင်ဆာတွေ ဘာတွေရော ဖြစ်သွား နိုင်ပါလား။ ဒီမှာ ဆေးခန်းပြတာတော့ ခွဲစိပ် ကုသရမယ်ဆိုလို့ပါ။ ဆေးပညာနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အင်္ဂလိပ် စကား အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ ဘာသာစကား အခက်အခဲကြောင့် ဆရာဝန် ရှင်းပြတာရော Online မှာ English လို ပြန်ဖတ်တာတွေရော ပေါင်းပေမယ့် သိချင်သလောက် မသိရပါဘူး။ အဲဒါဖြစ်နေချိန်ရော ခင်ပွန်းသည်နဲ့ အတူနေလို့ ရပါလား။ မခွဲတဲ့နည်းနဲ့ ကုလို့ရရင် ကုချင်လို့ပါ။ ခွဲစိပ်ရမှာ ကြောက်ပါတယ်။ ဒီတနည်းပဲရှိတယ် ခွဲမှရမယ် ဆိုလဲ နောင်ဆက်ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်ကို သိချင်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ Antibiotic သောက်ပြီး ရေနွေးနဲ့ စိမ်ပါတယ်။ နဲနဲတော့ သေးလာတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ အရှင်း ပျောက်မယ့်နည်းများ ရှိမလားဆရာ။
မိန်းကလေး-အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ မိန်းမအင်္ဂါ အဝနားမယ် တဖက်တချက်မှာ စမ်းလို့မရ၊ မမြင်ရတဲ့ အကျိတ်လေး တစုံစီ ရှိကြတယ်။ အဲဒီ Bartholin's glands ခေါ်တာကနေ (ဗဂျိုင်းနား) မွေးလမ်းကြောင်းကို စိုနေစေအာင် အရည်လေးတွေ ထုတ်ပေးနေတာမို့ အတော် အသုံးကျတယ်။
အရည်ထွက် ပြွန်ငယ်လေး Duct က ဆို့ပိတ်နေရင် (ဆစ်စ်) ဖြစ်လာမယ်။ အကျိတ်ပါဘဲ။ STD လိင်ကတဆင့်-ကူးစက်ရောဂါ မဟုတ်ပါ။ အနေမတတ်လို့လဲ မဟုတ်ပါ။ ရှက်စရာ မဟုတ်ပါ။ အရွယ်အစား ပဲစေ့လေး လောက်ကနေ ကြက်ဥလောက်ထိ ရှိနိုင်တယ်။ ဘာလို့ ဖြစ်သလဲ ကံမကောင်းလို့ ပြောရင် ငြင်းမရပါ။
အရွယ်ကောင်းတွေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပေမဲ့ မပြောချင်ပါ။ တခြားအရွယ်တွေက မကောင်းသလို ပြောရာကျနေမယ်။ အိမ်ထောင်ပြု၊ မီးဖွါးနိုင်တဲ့ အရွယ်လို့ တိတိပပ ပြောချင်တယ်။ နဲနဲအရွယ်ကြီးသူမှာ လာဖြစ်ရင် လိုလိုမယ်မယ် Biopsy အသားစ စစ်ဆေးတာပါ လုပ်မယ်။ ကင်ဆာ မဟုတ်တာ သေခြာချင်လို့ပါ။
သူကနေ ဆက်ပြီး ရောဂါကြီး မဖြစ်စေပါ။ သိပ်ကြီးရင် အနေ-အသွားခက်နိုင်တယ်။ နောက်အသစ် ပြန်မဖြစ်ဘူးလို့တော့ ရာနှုန်းပြည့် အာမမခံပါ။ ရောဂါပိုး ဝင်လို့ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပေမဲ့ ဖြစ်နေသူမှာ ပိုးဝင်လာနိုင်တယ်။ ပြည်တည်လာရင်တော့ Bartholin's abscess ခေါ်တော့တယ်။
ဝင်တဲ့ပိုး အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ Chlamydia (ကလာမိုင်ဒီးယား) နဲ့ Gonorrhea (ဂနိုးရီးယား) အပြင် Escherichia coli လို အူလမ်းမှာ နေတတ်တဲ့ (ဗက်တီးရီးယား) တွေကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သတိထားမိမှာပေါ့ ဥရောပက အီး-ကိုလိုင် သတင်း။
ကုသဘို့ရာ အရွယ်အစားပေါ်လဲ မူတည်တယ်။ သေးသေးလေးဆို ထားလိုက်ပါအုံး။ တချို့က အကြီးမမြန်ဘူး။ ပိုးမဝင်သေး၊ မနာသေးရင် အေးအေးဆေးဆေးပေါ့။ အလုပ်ချိန်၊ ကျောင်းချိန် လွတ်တာရွေး၊ စိတ်ချ-အားကိုးချင်တဲ့ ဆရာဝန်ရှာ။ ဘာသာရေးလုပ်၊ ကံကောင်းအောင်။
(ဆစ်စ်) ဖြစ်လာပေမဲ့ ပိုးမဝင်မချင်း မနာဘူး။ တချို့ကြ (အင်ဖက်ရှင်) ဝင်ပြီး အနာပေါက်သလို ပေါက်ထွက်၊ အမာရွတ် ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ စမ်းလို့ တွေ့လာရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ OG မဟုတ်လဲ Surgeon ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ လဲရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို စပါယ်မရှယ်တွေလဲ လုပ်ပေးရတာပါဘဲ။
အိမ်မှာတင် လုပ်နည်းလဲ ရှိတယ်။ သူများတွေဆီမှာတော့ Sitz baths ရေချိုးနည်းဆိုတာ ညွှန်းမယ်။ စပါယ်ရှင် ရေချိုးကန် ဆိုတာတောင် ရှိသေးတာ။ ဘာမှ ထွေလီကာလီ လုပ်စရာ မလိုပါ။ ဖြစ်တဲ့နေရာကို ရေနွေး (ခံနိုင်ယုံ) အပူထဲမှာ စိမ်နေခိုင်းတာပါ။ ၁ဝ-၁၅ မိနစ်ကြာ၊ တနေ့ ၃-၄ ခါ။ နာတာကို Painkiller အနာသက်သာဆေး တခုခုသောက်ပါ။
ပိုးဝင်ရင် ပဋိဇီဝဆေး သောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သုတေသန လုပ်ကြည့်တော့ Antibiotics ဆေးက အလုံပိတ်နေတဲ့ နေရာအထိ လုံလောက်အောင် မရောက်တာ သိရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခွဲစိတ်မှု တကယ်လိုတယ်။ ပြည်ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာ ရှိရှိ ထုတ်ပြစ်ရတယ်။ "ပြီပေါက် ပျောက်ပြီ" ဆိုတာ ကာရံရှာ ပြောတာ မဟုတ်ပါ။
ကံက အတော် မကောင်းရင် ပြန်ဖြစ်တာ နှစ်ခါမကသူလဲ ရှိတယ်။ ခွဲစိတ်တာနဲ့ Laser လေဆာနည်းလုပ်လို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာက အခုပျောက်တာရော နောက်ထပ်မဖြစ်ဘို့ရော ပြောတာပါ။
Local anesthetic ထုံဆေးထိုးမယ်။ Incision ခွဲမယ်။ Drain ရှိတာတွေ ထုတ်မယ်။ Gauze ပိတ်ကျဲစနဲ့ ဆေးထည့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် Catheter ပိုက်ငယ်လေး ထည့်ချင်ထည့်မယ်။ ပိတ်ကျဲစကို ၂၄-၄၈ နာရီမှာ ပြန်ထုတ်မယ်။ Catheter ဆိုရင် ကြာကြာ ထားမယ်။
ထပ်ပြီး ကံမကောင်း ပြန်တာက ပိုးဝင်နေတဲ့ အကျိတ်က ထုံဆေး မတိုးတတ်ဘူး။ ဘယ်လို ရင်းနေတဲ့ အနာမှာဖြစ်ဖြစ် အဲလိုဘဲ။ လူနာက နာတာ သိပ်မခံနိုင်ရင် မေ့ဆေး-အိပ်ဆေး လိုနိုင်တယ်။ အဲလိုလုပ်ပြီးရင်တော့ Antibiotic ဆေးက ကောင်းကောင်း အလုပ်ဖြစ်ပြီ။ (ကို့စ်) ကုန်အောင် သောက်ပါ။
Marsupialization ခွဲစိတ်နည်းကတော့ တမူထူးတယ်။ ရာသက်ပန် အရည်ထွက်နေစေအောင် ပြန်ချုပ်ရာမှာ တမျိုး လုပ်ရတယ်။ ဘယ်နည်းနဲ့ခွဲခွဲ အိမ်ထောင်သည်ဆိုရင် ၂-၃ ပါတ်လောက် ဝေရာမဏိ လုပ်နေရလိမ့်မယ်။
အဲ့ မြန်မာလို၊ အားလုံး လက်ခံတာ မရှိသေးဘူး ထင်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းဆရာတွေ ရေးတာလဲ မဖတ်ဘူးသေးပါ။ မမြင်ကွယ်ရာမှာ အနာ ဖြစ်တာလို့ ပြောရင် ဆရာဝန် နားလည်ပါတယ်။
၀မ်းချုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ အရာကို လူတိုင်း တွေ့ကြုံဖူးပါလိမ့်မယ် ။ ၀မ်းချုပ်စေတဲ့အကြောင်းအရာ အများကြီး ရှိတဲ့အ နက်က ရေဓါတ်နည်းခြင်းနဲ့ အမျှင်ဓါတ်နည်းခြင်းကြောင့် ၀မ်းချုပ်ခြင်းဖြစ်တာ အများဆုံးပါပဲ ။ တချို့ဆိုရင် ၀မ်းချုပ် တဲ့အတွက် ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ပြီး ခေါင်းတွေအုံ ခေါင်းတွေကိုက်တဲ့အထိတောင် ခံစားရလေ့ရှိပါတယ် ။ ၀မ်း ချုပ်ခြင်း ကို constipation အပြင် costiveness , dyschezia , dyssynergic defaecation စသဖြင့် လည်း ခေါ်ကြပါသေးတယ် ။ ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ bowel moments (အူလှုပ်ရှားခြင်း ၊ ကျင်ကြီးစွန့်ခြင်း) ဟာ ခက် ခဲနေ ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ၀မ်းချုပ်ခြင်းဆိုတာ အဖြစ်များတဲ့ ၀မ်းသွားနေစဉ် နာကျင်ခြင်း ( painful defecation) ပဲဖြစ် ပါတယ် ။ အရမ်းကို ၀မ်းချုပ်နေပြီးဆိုရင်တော့ obstipation (လေနှင့်ဝမ်းလုံးဝမသွားနိုင်ခြင်း ) fecal impaction ( ၀မ်းလုံးဝမသွားပဲ ပိတ်ဆို့ခြင်း ) စသည်တို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
လူဦးရေရဲ့ ပျမ်းမျှ ၂ - ၃၀% လောက်ဟာ ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို ခံစားရလေ့ရှိပါတယ် ။ ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေ တဲ့အ ချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။ အဓိကအားဖြင့် ပုံစံ ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ လုံးဝပိတ်ဆိုးပြီး ၀မ်းမသွားနိုင်ခြင်း ( obstructed defecation ) နဲ့ အူများလှုပ်လျားမှု လျော့နည်းခြင်း နှေးကွေးခြင်း ( colonic slow transit , hypomobility ) တို့ပဲဖြစ် ပါတယ် ။ ဆေးရုံတွေကိုရောက်လာတဲ့ လူနာတွေရဲ့ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ obsturcted defecation ကြောင့်ရောက် လာတာများပါတယ် ။ အူလှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ colonic slow transit constipation ကို ဖြစ်စေ တဲ့အရာတွေကတော့ အစားအသောက် ၊ ဟော်မုန်း ၊ ဆေးဝါးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ heavy metal toxicity တွေ ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ကို ကုသတဲ့အခါမှာလည်း အစားအသောက်ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း ၊ ၀မ်းပျော့ဆေး ၊ ၀မ်းချုဆေးတောင့် ၊ ခွဲစိတ်ခြင်း စသည်တို့ပါဝင်ပါတယ် ။ ၀မ်းချုပ်ခြင်းဆိုတာ လက္ခဏာတစ် ခုသာဖြစ် တယ် ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး ။ သူ့ကို ထိထိရောက်ရောက်ကုသချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့ cause ကို အရင် ရှာဖွေဖို့လိုပါတယ် ။
- အူလှုပ်ရှားမှု Bowel moment (ကျင်ကြီးစွန့်ခြင်း ) ဟာ တစ်ပတ်ကို သုံးကြိမ်သို့မဟုတ် သုံးကြိမ်ထက်နည်းနေခြင်း
- ၀မ်းသွားရတာ ခက်ခဲခြင်း ( ညှစ်ရခြင်း ၊ စမြင်းခေါ် အမာများသွားခြင်း )
- ၀မ်းသွားပြီးသော်လည်း မပြီးမပြည့်စုံသကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း ၊ ၀မ်းကျန်နေသလို ခံစားရခြင်း စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ကလေးငယ်တွေမှာ ၀မ်းသွားတာကတော့ formula နို့မှုန့်တွေနဲ့ အစာစာကျွေးတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ် ။ မွေးပြီး တဲ့အခါမှာ မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေဟာ ၄ ကြိမ် ၅ ကြိမ်လောက် ပျော့ပျော့ (အရည်သာသာ ) ကျင်ကြီး စွန့်လေ့ ရှိပါတယ် ။ နို့မှုန့်တိုက်တဲ့ကလေးတွေထက် မိခင်နို့စို့တဲ့ကလေးတွေက ကျင်ကြီးစွန့် တဲ့အကြိမ်အရေ အတွက် ပိုများ ပါတယ် ။
- congenital ( မွေးရာပါ )
- secondary ( ဒုတိယအကြောင်းအရင်း ) စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ် ။ အဖြစ်အများဆုံးကတော့ primary ဖြစ်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး ။ အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာတော့ အမျှင်ဓါတ်စားသုံးမှု လျော့နည်းခြင်း ၊ ရေသောက် နည်းခြင်း ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း ၊ ဆေးဝါးတွေရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ၊ hypothyroidism နဲ့ကင်ဆာရောဂါတို့ဖြစ်ပါတယ် ။
၁ ။ Primary
Primary မှာတော့ ခြောက်လကျော်လောက်ထိ ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို ခံစားရပြီး ဒါဟာ ဆေးဝါးတွေ ရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးကြောင့်လည်းမဟုတ်သလို ၊ ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး ။ ဗိုက်အောင့်ဗိုက် နာခြင်းလည်းမ ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Irritable bowel syndrome နဲ့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ် ။ ၀မ်းချုပ်ခြင်းရဲ့ common cause ဖြစ်ပါတယ် ။
၂ ။ အစားအသောက်
အမျှင်ဓါတ်စားတာနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ၊ ရေသောက်တာနည်းတဲ့အတွက် ၊ အစားအစာ စားတာနည်းတဲ့အတွက် ၀မ်းချုပ်ခြင်းဖြစ်ရပါတယ် ။
၃ ။ ဆေးဝါးများ
ဆေးဝါးအများစုမှုာ ၀မ်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပါရှိကြပါတယ် ။ ဘာဆေးတွေလဲဆိုတော့ Opioids ( အကိုက် အခဲပျောက်ဆေးများ ) ၊ ဆီးဆေးများ ၊ စိတ်ကျရောဂါပျောက်ဆေးများ ၊ ယားယံခြင်းပျောက်သောဆေးများ ၊ ဗိုက်အောင့်ပျောက်ဆေးများ ၊ အတက်ကျဆေးများ ၊ အလူမီနီယံပါသော အစာအိမ်ဆေးများ စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ် ။
၄ ။ Metabolic and Muscular
အင်ဒိုခရိုင်း ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ ကယ်ဆီယမ်များခြင်း ၊ သိုင်းရိုက် ဟော်မုန်းနည်းခြင်း ၊ ဆီးချိုသွေးချို နဲ့ cystic fibrosis ၊ celiac disease စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းတဲ့ မလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့လူတွေမှာ ၀မ်းချုပ်ခြင်း အဖြစ်များပါတယ် ။
၅ ။ စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာ
နာကျင်မှုကို အလွန်အမင်းကြောက်ရွံ့သူများ ၊ လူစုလူဝေး လူထု နားနေခန်းများကို ကြောက်သူများ ၊ ပျင်းရိသူများ ဟာလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို ခံစားရလေ့ရှိတဲ့ သူတွေဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
တခါတခါမှာ ၀မ်းချုပ်ခြင်းကိုကုသတာထက် ကာကွယ်တာက ပိုလွယ်ပါတယ် ။ ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေဖို့ ပုံမှန်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ရပါမယ် ။ ရေများများသောက်ဖို့ လိုပြီး အမျှင်ဓါတ်အများကြီးပါတဲ့ အစားအ စာတွေစားဖို့လိုပါတယ် ။ မနက်စောစော ၀မ်းသွားတဲ့အကျင့် အိမ်သာ မှန်မှန်တက် တဲ့အကျင့် ကိုလည်းမွေး မြူဖို့လိုပါတယ် ။ ပုံမှန် ၀မ်းပျော့ဆေးတွေသုံးစွဲခြင်းက သိပ်တော့မကောင်းလှပါဘူး ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ကျင်ကြီး စွန့်တဲ့အလေ့အထဟာ ကြာလာရင် အဲဒီဝမ်းပျော့ဆေးတွေအပေါ်မှာ တည်မှီလာမှာ ဖြစ်တဲ့အ တွက်ဖြစ်ပါတယ် ။ Mechanical stimulation အနေနဲ့ ၀မ်းချူဆေးလုံး Enemas ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်ပလည်း ၀မ်းချူဆေး လုံးဟာ အစာဟောင်းအိမ် ( rectum ) ထဲက မစင်တွေကိုသာလျှင် စွန့်ထုတ်စေနိုင်ပြီး အစာအိမ် နဲ့အူလမ်းကြောင်း Intestinal tract ထဲကိုတော့ မရောက်ရှိနိုင်ပါဘူး ။
၀မ်းပျော့ဆေးမှာလည်းအ သုံးများတာက MOM လို့ခေါ်တဲ့ Milk of Magensia ဖြစ်ပါတယ်ယ ။ဈေးသက်သာပြီး အန္တရာယ်မ ရှိတာကြောင့် လူသုံးများပါတယ် ။ MOM နဲ့မသက်သာမှသာလျှင် ခုနကပြောတဲ့ ၀မ်းချူဆေးလုံး stimulant တွေ ကိုသုံးသင့်ပါတယ် ။
အမျှင်ဓါတ် Fiber တွေဟာ အပင်တွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး အမျှင်ဓါတ်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေဟာ အစားအ စာတွေ ကိုစားသောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းအတွင်းမှာ ကျန်ရှိနေခဲ့ပါတယ် ။ အမျှင်တွေ ဟာ အရာဝထ္ထု တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ အစုအဝေးကြီးတစ်ခုသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ် ။
အမျှင်မှာ soluble နဲ့ insoluble ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိပါတယ် ။ အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေဖို့အတွက် ဖိုက်ဘာ ၂ မျိုးစလုံး က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ် ။ ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ soluble fiber တွေဟာ သင့်ရဲ့ မစင် ထဲမှာ ရေတွေ ကို စိမ့်ဝင်စေပြီး ပျော့ပြောင်းစေပါတယ် ။ ဒီတော့ အူတွေကနေ စွန့်ထုတ်ရတာ လွယ်ကူသွားပါတယ် ။ မပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ fiber တွေ ကတော့ မစင်တွေရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီး အလျှင်အမြန်စွန့်ထုတ်စေခြင်းအားဖြင့် သင့်ကို ၀မ်းချုပ်တဲ့ ခံစားချက်ကြီးကနေ လွတ်ကင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ် ။ Virginia Commonwealth University Health Center in Richmond,Va မှ ဒါရိုက်တာ နဲ့ ပရော်ဖက်ဆာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Stephen Bickston က " အမျှင်ဓါတ် ပါတဲ့အစားအစာများများစားသုံးတဲ့လူတွေဟာ ၀မ်းချုပ်ခြင်းနည်းလေ့ရှိတယ် " လို့ပြောခဲ့ပါတယ် ။ American Dietetic Association ကတော့ အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၅၀ အတွင်း အမျိုးသမီးတွေဟာ နေ့စဉ်အစားအသောက်ထဲမှာ ဖိုက်ဘာ ၂၅ ဂရမ်စားသုံး ရမယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ ယောင်္ကျားတွေကတော့အဲဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားမှာ ၃၈ ဂရမ်စားသုံး ရမယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ ငါးဆယ်အထက် အမျိုးသမီးတွေကတော့ ၂၁ ဂရမ်စားသုံးသင့်ပြီး အမျိုးသားတွေကတော့ ၃၀ ဂရမ်စား သုံးသင့်ပါတယ် ။ Dr.Bickston ညွှန်ပြခဲ့တာကတော့ အမေရိကန်တွေဟာ ပျမ်းမျှ တစ်နေ့ကို ဖိုက်ဘာ အမျှင် ဓါတ် ၁၃ ဂရမ်စားသုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ ဒါဟာ သတ်မှတ်ထားတာကိုရောက်ဖို့ လိုပါသေးတယ်တဲ့ ။
အမျှင်ဓါတ်ပါတဲ့ အစားအစာ အများစုမှာ ဗီတာမင် သတ္တုဓါတ်တွေနဲ့ပါဝင်ပြီး အဆီနဲ့ ကယ်လိုရီတွေတော့ နည်းလေ့ ရှိပါတယ် ။ အမျှင်ဓါတ်ပါသောအစားစာတွေကတော့
- သစ်သီးများ (သစ်တော်သီး ၊ ပန်းသီး ၊ လိမ္မော်သီး စသည် )
- အရွက်များ ( ဂေါ်ဖီ ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ၊ မုန်လာဥ ၊ အာလူး ၊ ဖယုံ စသည်)
- ပဲအမျိုးမျိုး ၊ စားတော်ပဲ ၊ ပဲနီကလေး
- ဂျုံပေါင်မုန့် ၊ ဆန်ညို ၊ ဖွဲမှုန့် ၊ အုတ်ဂျုံမှုန့်
- နေကြာစေ့ ၊ မြေပဲ ၊ မက်မွန် ၊ သစ်ကြားသီး စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ယခုနောက်ပိုင်းမှာ အမျှင် စားတာနည်း တဲ့သူတွေ အတွက် Ispaghula husk လို့ခေါ်တဲ့ Psyllium လို့ခေါ်တဲ့အပင်တစ်မျိုးကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အမျှင်ဖြည့် စွက် အမှုန့် လေးတွေ ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ခါသောက်ရင်ရင် တစ်ထုပ်လုံး ကို ရေဖန် ထွက်ထဲ ထည့် မွှေနှောက်ပြီးသောက်သုံးနိုင်ပါတယ် ။
Ref : http://en.wikipedia.org/wiki/Constipation
Posted by သက်တန့်ချို3comments
Labels: Constipation, Family health, Health Awareness, Health behavior, Health care, health education, Public health
ဖောလစ်အက်ဆစ်ကို vitamin B9 (သို့မဟုတ်) Vitamin Bc , folacin နဲ့ folate လို့ လည်းခေါ်တွင်ပါတယ် ။ ရေ မှာ ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ ဗီတာမင် ဘီနိုင်းဖြစ်ပြီး pteroyl-L-glutamic acid , pteroyl-L-glutamate နဲ့ pteroylmonoglutamic acid ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖောလစ်အက်ဆစ်ဟာ ဇီဝနည်းအရ သူ့ဘာသာသူ active မဖြစ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့်လည်း tetrahydrofolate နဲ့ အသည်းထဲမှာ dihydrofolic acid အဖြစ်ပြောင်း သွားနိုင်ခြင်း က အလွန်ကို အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ဖောလစ်အက်ဆစ်ဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်က များပြား လှတဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတွေအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးတဲ့အရာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ လူ့ခန္ဓာကိုယ် ဟာ ဒီအန်အေ တွေ ထုတ်လုပ်ဖို့ ပြုပြင်ဖို့ အတွက် folate ကိုလိုအပ်ပါတယ် ။ ဆဲလ်တွေ ပွားများဖို့ ၊ ကြီးထွားဖို့ အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်တွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေမှာလည်း အထူးလိုအပ်ပြီး အချို့သော ကင်ဆာရော ဂါတွေမှာ အစာစားခြင်း တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ပေးပြန်ပါတယ် ။ သဘာဝ folate တွေအများအပြားပါဝင်တဲ့ သာမန် အစားအစာတွေဟာကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်မှုကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တွေ့ရှိချက် ကွဲပြား မှုတွေကတော့ သောက်ဆေးတွေမှာ folate တွေအများကြီးပါဝင်နေခြင်းဟာ အချို့သော ကင်ဆာတွေဖြစ် ပွားမှု ကို အားပေးစေနိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုပြန်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကလေးတွေနဲ့ အရွယ်ရောက်စ လူငယ်တွေမှာ ကျန်းမာတဲ့ သွေးနီဥတွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် folic acid ကို လိုအပ်ပြီး သွေးအားနည်းရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင် ပါတယ် ။
Foate နဲ့ folic acid ဟာ တကယ်တော့ Latin နာမည်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ folium ကနေဆင်းသက်လာတာပါ ။ အဓိပ္ပါယ် ကတော့ သစ်ရွက်လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ သစ်သီးသစ်ရွက်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေဟာ ပြီးပြည့်စုံ တဲ့ dietary source တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဖောလစ်အက်ဆစ်တွေ လျော့နည်းနေရင် folate deifciency ဖြစ်နိုင်ပြီး သာမန် western diets တွေမှာတော့ ဖြစ်လေ့မရှိပါဘူး ။ ဖောလစ်တွေ ချို့ယွင်းနေပေ မယ့်လည်း ၄ လလောက်ထိ မသိသာနိုင်ပါဘူး ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဖောလစ် အက်ဆစ် 500-20 000 mcg သိုလှောင်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖောလစ်အက်ဆစ်ချို့တဲ့ခြင်းဟာ များ စွာသော ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ မှတ်သားဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာကတော့ သန္ဓေသားမှာ neural tube defects တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ ဖောလစ်အက်ဆစ်ချို့တဲ့ခြင်းဟာ ၀မ်းသွားခြင်း ၊ သွေးအား နည်းရော ဂါ ၊ အားနည်းခြင်း ၊ အသက်ရှုခက်ခဲခြင်း ၊ အာရုံကြောအားနည်းခြင်းနဲ့ ခြေလက်များထုံကျင်ခြင်း (peripheral neuropathy ) တို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဆိုးကျိုးနှင့်ပြဿနာများ ၊ သတိ လစ်ခြင်း ၊ အာရုံထွေပြားခြင်း ၊ စိတ်ကျရောဂါ ၊ လျှာ ရောင်ခြင်း ၊ အစာအိမ်နှင့် ပါးစပ်အနာများဖြစ်ခြင်း ၊ ခေါင်း ကိုက်ခြင်း ၊ ရင်တုန်ခြင်း ၊ ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ အမူအယာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာ များဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။
Folate ပမာဏ နည်းပါးခြင်းဟာ homocystenine လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးစုံပုံခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဒီအန်အေတွေထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ ပြုပြင်ခြင်းတွေမှာလည်း ချို့ယွင်းသွားပြီး ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုကို ဦးတည်စေ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ (IHD) ရှိသူတွေမှာ ဖော လစ်အက်ဆစ်တွေ အများ အပြားသောက်သုံးရင်တော့ ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို မြင့်တက်စေ ပါတယ် ။ အသက် ၁၉ နှစ်ကျော် လူငယ်တွေမှာ နေ့စဉ်ဖောလစ်အက်ဆစ် ၁၀၀၀ မိုက်ခရိုဂရမ်လိုအပ်ပြီး မွေးကင်းစကလေးငယ် ၆ လအထိ ကတော့ နေ့စသ် ၆၅ မိုက်ခရိုဂရမ်လိုအပ်ပါတယ် ။ ကိုယ်ဆောင်သည်တွေမှာတော့၈၀၀ မှ ၁၀၀၀ မိုက်ခရို ဂရမ်အထိလိုအပ်ပါတယ် ။
ဖောလစ်အက်ဆစ်ကိုဘယ်နေရာတွေက ရနိုင်သလဲ ?
- ဒေါက်ခွ ( spinach) , ကညွှတ် ၊ ခါးဥဖြူ ၊ တရုတ်မုန်လာစသော ဟင်းရွက်များ
- ပဲခြောက် ၊ ပဲစို ၊ ပဲတောင့် ၊ ပဲစေ့ ၊ ပဲပင်နှင့် ပဲနီကလေး
- ဥ အမျိုးမျိုးမှ အနှစ်များ
- Baker's yeast
- ခေါက်ဆွဲခြောက် ၊ နှံစားပင် ၊ ကောက်နှံပင် နဲ့ အသင့်လုပ် နံနက်စာ cereal တွေမှာ ဖောလစ် အက်ဆစ် ၂၅ % မှ ၁၀၀% အထိပါဝင်ပါတယ် ။
- အသည်း ( folate တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ် )
- ကျောက်ကပ် စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင်ဖောလစ်အက်ဆစ် အတန်အတင့်ပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကတော့ လိမ္မော်ဖျော်ရည် ၊ နာနတ်သီး ၊ စပျစ်သီး ၊ ငှက်ပျော်သီး ၊ respberry သီး ၊ ရှောက်ခါးသီး နဲ့ အသီးအရွက်တွေဖြစ်တဲ့ မုန်လာဥနီ ၊ ဂျုံ ၊ ပြောင်း ၊ အာလူး ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ ဆလတ်ရွက် ၊ ဂေါ်ဖီထုပ် နဲ့ ဘီယာ စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်အစား အစာတွေက ဘယ်လောက်ထိအတိအကျပါသလဲဆိုတာကိုတော့ USDA National Nutrient Database for Standard Reference မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် ။ အချို့နိုင်ငံတွေမှာ ဂျုံ ၊ စပါးစတဲ့ထုတ်ကုန်တွေမှာ ဖောလစ်အက်ဆစ်ကို ထည့် သွင်းကြပြီး ဒီလိုတိုင်းပြည်တွေမှာ လူထုရဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ်လိုအပ်ချက်ကို လုံလောက်စွာ ရရှိကြပါတယ် ။ DEF ဆိုတာဟာ dietary folate equivalent system ကို ရည်ညွှန်းပါတယ် ။ DEF ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရ စားအသောက်တွေရဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ်ဟာ 1 mcg ဖြစ်ပြီး သောက်ဆေးတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ဖောလစ် အက်ဆစ် ဟာ 0.6 mcg ဖြစ်ပါတယ် ။ အစာမစားထားတဲ့ အချိန်ဒီ supplement ကိုသောက်မယ်ဆိုရင်တော့ folic acid ဟာ စုပ်ယူနိုင်မှု 0.5mcg ထိလျော့ကျသွားပါတယ် ။ သဘာဝအတိုင်း အစားအစာတွေ မှာပါဝင်တဲ့ ဖော လစ်အက် ဆစ်ဟာ အပူချိန်အမြင့်နဲ့ UV light ကို ခံနိုင်ရည်မရှိပဲ ရေမှာပျော်ဝင်ပါတယ် ။ အချို့ အစားအစာ အစား ထိုး ထုတ်ကုန်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ folate ဟာ RDA ( recommended daily allowance ) အရသတ် မှတ်ထား တဲ့ folate ကို လိုက်မှီနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လုံလောက်မျှတတဲ့ folate ကိုသောက်သုံးခြင်းဟာ သန္ဓေသားမူမမှန်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းကို ကာ ကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် Neural tube defects တွေဖြစ် ပြီး ဖောလစ် ချို့တဲံ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်များဖြစ်ပါတယ် ။ Neural tube defects ဆိုတာ ဟာ ကျောရိုး ၊ ဦးခေါင်း ခွံနဲ့ဦးနှောက်တို့မှာ ပုံသဏ္ဍာန်မမှန်တဲ့ ဖွံဖြိုးမှုတွေဖြစ်စေပြီး spina bifida , anencephaly တို့ကိုဖြစ်စေနိုင် ပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ပထမ လ အတွင်းမှာ ဖောလစ် အက်ဆစ် ချို့တဲ့ခြင်း ၊ စားတဲ့စား အသောက်တွေ မှာလည်း ဖောလစ်အက်ဆစ်လုံလုံလောက်လောက်ပါဝင်ခဲ့ရင် Neural tube defects တွေ ဖြစ်နိုင် ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဖောလစ်အက်ဆစ်ပါဝင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေး ၊ သောက်ဆေးတွေ ဟာ မွေး ရာ ပါချို့ယွင်းချက်တွေဖြစ်တဲ့ မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါ Congenital heart disease နဲ့ နှုတ်ခမ်း ကွဲရောဂါ cleft lips တို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင်ခြေချောင်းလက်ချောင်းမူမမှန်တာတွေနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်း ပုံသဏ္ဍန်မ မှန်တာတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် မှာ ဖောလစ်အက်ဆစ်ချို့တဲ့ ရင်တော့ နေ့ မစေ့ လမစေ့ပဲ ကလေးမွေးခြင်း Preterm deliver နဲ့ ပေါင်မစေ့ပဲမွေးခြင်း Low birth weight တို့ကိုဖြစ်နိုင်ပြီး ကလေးကြီးထွားမှုနှုန်းကိုလည်းလျော့နည်းစေပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဖောလစ်အက် ဆစ်လျော့နည်း ရင် သွေးထဲမှာ homocysteine level များလာပြီး ဒီလိုများလာခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ကို ဆက်တိုက်ပျက်ကျစေနိုင်ပါတယ် ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ အချင်းကွာခြင်း ၊ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ခြင်း ( pre-eclampsia ) တို့ကိုဖြစ်စေနိုင် ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကို ဖောလစ်အက်ဆစ်မှန်မှန်သောက်သုံးဖို့ နဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ်ပါဝင်တဲ့စအားစာတွေ စားသုံးဖို့ အတွက် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ အနည်းဆုံး 400 mcg လောက်ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေ သောက်ဆေးတွေ သောက်သုံးဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဖောလစ်အက်ဆစ်သောက်သုံးခြင်းဟာ ကလေးငယ်ကို ရောဂါတွေကနေ ကာ ကွယ်ပေးနိုင် ယုံသာမကပဲ ရောဂါရှိနေတဲ့မိခင်တွေ ၊ ဆေးတွေသောက်နေ ရတဲ့မိခင်တွေနဲ့ ဆေး လိပ်သောက် မိခင်တွေကိုပါ ပြဿနာဖြစ်ပွားနိုင် မှု လျော့ နည်းစေနိုင် ပါတယ် ။ ဖောလစ်အက်ဆစ်ဟာ သုတ်ကောင်တွေ မှာ ဖြစ်တတ်တတဲ့ ခရိုမုန်ဆုန်း ချို့ယွင်းချက်တွေကိုလည်း လျော့နည်းစေပါတယ် ။ ဖောလစ် အက် ဆစ်က ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကတော့
- ဓါတ်မတည်းခြင်းများ (allergy)
- လေးဖက်နာ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါ
- ရောဂါပိုးများ ၀င်ရောက်ခြင်း ( infectious disease)
- ပါကင်ဆန်ရောဂါတွင် အရိုးဆုံးရှုံးခြင်း
- B12 deficiency စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ပြည်သူလူထုနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေအနေနဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ် အကြောင်းကို ဗဟုသုတရ ရှိကြပြီး ဖော လစ် အက်ဆစ်ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ ။
Labels: Family health, Folic acid, Health care, health education, Primary health care, Public health
( ဒီအကြောင်းလေးကို မေးထားတဲ့သူကလည်း အစ်မကြီး အဖြူရောင်နတ်သမီးဖြစ်ပါတယ် ။ Facebook မှာမေး ထားခြင်းပဲဖြစ် ပါတယ် ။ လက်လှမ်းမီသလောက် စုစည်းရှာဖွေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ )
Gluten free diet ဆိုတာကတော့ gluten မပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ Gluten ဆိုတာ ကတော့ ဂျုံစေ့ ၊ မုယောစပါး ၊ ဘာလီ ၊ ရိုင်းဂျုံ ၊ မုယောခြောက် ၊ စသည်တို့မှာ တွေ့ရတဲ့ ပရိုတိန်း တစ် မျိုးဖြစ် ပါတယ် ။ Gluten ကို အစားအသောက်တွေမှာ အနံ့ကောင်းစေဖို့ ၊ ကြာရှည်ခံဖို့ နဲ့ ထူထဲစေဖို့ တခါတရံ dextrin အနေနဲ့ သုံးကြတာရှိပါတယ် ။ Gluten free အစားအစာတွေဟာ Celiac disease နဲ့ ဆက်နွယ်နေ တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ dermatitis herpetiformis (အရေပြားရောင်ရမ်းနာတစ်မျိုး ) နဲ့ ဂျုံအလာဂျီ တို့ကို ကုသဖို့အတွက် ဆေးပညာ အရ လက်ခံထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ကုသချက်ဖြစ်ပါတယ် ။ Celiac disease ဆိုတာ ကတော့ gulten intolerance လို့ အသိများပြီး အမေရိကန် ၁၃၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ ( genetic) ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ Celiac disease ရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ ၀မ်းသွားခြင်း ၊ ကိုယ် အလေး ချိန်ကျခြင်း ၊ အာဟာရဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်း စတာတွေဖြစ်ပါတယ် ။ European တွေမှာအဖြစ်များပြီး လတ် တလော လေ့စာစမ်းသပ်မှုအဖြေတွေအရတော့ လူမည်းတွေနဲ့ အာရှလူတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါ တယ် ။
Gluten free diet သည် အုတ်ဂျုံ ( မြင်းစားဂျုံ) ကိုဖယ်ထုတ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဆရာဝန်တွေကတော့ မြင်းစား ဂျုံ ( oats) ဟာ celiac ရောဂါခံစားရသူတွေအတွက် allergen တစ်ခုလား သို့မဟုတ် သူတို့ဟာ တခြား အလာ့ ဂျင်တွေကြောင့် ဖြစ်ရတာလားဆိုတာ ( ဂျုံကြိတ်ခွဲတဲ့နေရာမှာ တခြားအလာ့ဂျင်တွေနဲ့ ရောစပ်ခြင်း cross contamination ) ဆိုပြီး ၂ ပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ် ။ Gluten free ဆိုတာဟာ ဂလူတန်လုံးဝ မပါတာထက်စာရင် အန္တာရယ်မရှိလောက်တဲ့ပမာဏ ပါဝင်နေခြင်းကို ရည်ညွှန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လောက် ပမာဏလောက်ပါရင် အန္တရာယ်မရှိဘူဆိုတာကိုတော့ အတိအကျမသိရပါဘူး ။ လတ်တလော စနစ်တ ကျပြုလုပ်ထားတဲ့ review တစ်ခုအရတော့ နေ့စဉ် gluten 10mg အောက်စားသုံးခြင်းဟာ ဆိုကျိုးတွေ ကို မဖြစ်စေပါဘူး လို့ဆိုပါတယ် ။ Gluten free လို့ တံဆိပ်ကပ်ထားတာတွေဟာလည်း နိုင်ငံ တစ်ခုချင်းစီ အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနေပါတယ် ။ United States မှာဆိုရင်၂၀၀၇ စံသတ်မှတ်ချက်အရ Gluten free ဆိုတာ ဟာ gluten 20 ppm ထက်နည်းတဲ့အစားအသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လို့ FDA က သတ်မှတ်ခဲ့ ပါတယ် ။ လတ်တလော အပြည်ပြည်ဆိုရင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်ကတော့ 20ppm gluten လောက် ပါဝင်တဲ့အစားအစာကို Gluten free foods လို့ခေါ်ပါတယ် ။
အမျိုးမျိုးသော ဂျုံနဲ့ကစီဓါတ်ပါတဲ့စားဖွယ်တွေကို gluten free diet တွှေမဖြစ်စဉ်းစားကြပါတယ် ။ အသုံးအ များဆုံးကတော့ ပြောင်းဖူး ၊ အာလုံး ၊ ဆန် နဲ့ ကလောပီနံတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ပဲအမျိုးမျိုး ၊ ပဲပုပ် ၊ မြေပဲစ သည်တို့ကိုလည်း တခါတရံမှာ gluten free အစားအသောက်အဖြစ်အသုံးပြုကြပြီး ပရိုတိန်းနဲ့ dietary fiber အဖြစ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြပါတယ် ။ ပန်းဂျုံ (buckwheat) ဟာ ဂျုံနဲ့ ဆက်နွယ်မှုမရှိပါဘူး ။ ပန်းဂျုံကို gluten-free diet အဖြစ် လက်ခံအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ ဂလူတန်ကို အစားအစာတွေမှာ နည်းလုံးပေါင်းစုံနဲ့ အသုံးပြုကြ ပါတယ် ။ ဥပမာအားဖြင့် အစားအသောက်တွေ ရေရှည်တည်မြဲစေ၇န်သို့မဟုတ် ရေခဲမုန့်လိုမျိုး ၊ စားမြိန်စေ ဖို့အတွက် thickener အဖြစ်လည်းအသုံးပြုကြပါတယ် ။ Gluten free အစားအစာကို ပဲ စားမယ်လို့ ကြံရွယ် ထားတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ ဆေးတွေနဲ့ ဗီတာမင်တွေကအစ ပါဝင်တဲ့ ingredient (ပါဝင်မှုအမျိုး အစား) တွေကို သေချာ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ နှုတ်ခမ်းနီလိုမျိုး ၊ နှုတ်ခမ်းမှာသုံးတဲ့အမွှေးဆီ စတာတွေမှာ လည်း gluten ပါဝင်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် မသုံးခင်သေချာ စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ် ။ စာရွက်တွေမှာ ကပ်တဲ့ ကော် မှာလည်း gluten ပါပါတယ် ။ အစားအစာအမျိုးစုမှာ gluten ပါဝင်နေပေမယ့်လည်း သူတို့ဟာ ingredient list မှာတော့ အမြဲပါဝင်လေ့မရှိပါဘူး ။ ဘာလို့မပါသလဲဆိုတော့ ထုတ်ကုန်တစ်ခု စထုတ်စဉ်မှာ gluten ကို အသုံးမပြု တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပြင်ဆင်တဲ့အခါ (preparation or manufacturing ) မှာတော့ ပါဝင်လာ ပါတယ် ။ Natural flavoring လို့ ဆိုပေမယ့်လည်း gluten ပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက် သတိထား ရမှဖြစ်ပါတယ် ။
Gluten free လို့ကပ်ထားတဲ့ label တွေရဲ့မှန်ကန်မှု
Codex Alimentarius မှသတ်မှတ်ထားတဲ့စံအရ gluten free ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီစံညွှန်း ဟာ gluten မပါတဲ့ သဘာဝ အစာတွေကိုတော့မရည်ညွှန်းပါဘူး ။ လတ်တလော စမ်းသပ်ထားတဲ့ အဖြေတွေ အရ cloeliac disease ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် အမြင်ဆုံး လုံခြုံစိတ်ချမှု ၊ အန္တရာယ်မပေးနိုင်မှု ရှိတဲ့ အစားအစာ ဟာ 0.02% ( 200 parts per million ) လောက်ပဲရှိပါတယ် ။ မူလ ဂျုံစေ့ မှာ gluten 12 % ပါဝင်ပါ တယ် ။ သေးငယ်တဲ့ပမာဏဖြစ်ပေမယ့်လည်း cross contaminate ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုင်အစားအသောက်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာရေ့ာ စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာရော သတိထားဖို့တော့လိုပါတယ် ။ United States မှာတော့ gluten ကို တချို့သောအစားအစာတွေမှာ label ကပ်ထားလေ့မရှိပါဘူး ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ US FDA ဟာ gluten ကို GRAS - Generally Recognized As Safe ( ယေဘူယျအားဖြင့် အန္တရာယ်မရှိပါ ) လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုနောက် ဆုံး မှာတော့ အစားအသောက်တွေမဟုတ်တဲ့ ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဗီတာမင်ဆေးလုံးတွေမှာ အထူး သဖြင့် ဆေးတောင့် ပုံစံတွေမှာတောင်မှ gluten ဟာ binding agent အနေနဲ့ ပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ် ။
Gluten free ပေါင်မုန့်
ပေါင်မုန့်ဟာ အနောက်တိုင်းသားတွေ အတွက် မရှိမဖြစ်အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ wheat လိုမျိုးဂျုံစေ့ နဲ့ပြုလုပ် ထားပြီး gluten ပါဝင်ပါတယ် ။ Wheat gluten ဟာ အထူးသဖြင့် ပေါင်မုန့်ကို ဆွဲဆန့်လို့ ရအောင် ပေါင်မုန့်ကို ညက်သွားအောင် ပေါင်းစပ်ထည့်ဝင်ရတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ Gluten free ပေါင်မုန့် ကိုတော့ ဆန်နဲ့ပြုလုပ်ပြီး ဆန်ပေါင်မုန့် ၊ ပြောင်းမျိုးနှံစားပင်ပေါင်မုန့် ၊ ပြောင်းနှင့်ပြုပ်လုပ်ထားသော ပေါင်ုမန့် ပဲပေါင်မုန့် စသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် gluten မပါဝင်တဲ့အတွက် ရေရှည်မှာ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိမ်းနိုင် ဖို့တော့ မလွယ်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ဂလူတန်အစား xanthum gum , hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) , corn starch နဲ့ ဥတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ် ။
Gluten free အစားသောက်တွေမှာ Gluten free beer ကိုလည်းနောက် ပိုင်းတွင်ကျယ်စွာ ထုတ်လုပ် လာကြပြီဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲဒါဆိုရင် Gluten free diet တွေကိုစားသုံးခြင်းဖြင့် ဘာတွေဖြစ်နိုင် သလဲဆိုတာ ကို ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရအောင် ။
ဂလူတန်မပါဝင်တဲ့စားသောက်ကုန်အများစုမှာ ဖောလစ်ဓါတ် ၊ သံဓါတ်နဲ့ အမျှင်ဓါတ်တွေ နည်းပါးစွာ ပါဝင်တာ ကိုတွေ့ရပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် gluten free diet ကို အမြဲ မရရှိနိုင်တဲ့အတွက် GSE လို့ခေါ်တဲ့ Gluten-Sensitive Enteropathy လူနာတွေဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့တစ်နေ့တာ ဂျုံစပါး စာသည်တို့ကို စားလေ့မရှိကြပါဘူး ။ စံသတ် မှတ်ထားတဲ့ gluten free diet ဟာလည်း တစ်နေ့တာလိုအပ်တဲ့ အမျှင်ဓါတ် ၊ ဘီဝမ်း ၊ ဘီတူး ၊ ဖောလစ် ၊ သံဓါတ်နဲ့ ကယ်လ်စီယမ်တွေ ကိုလိုက်မမှီပဲ လျော့နည်းနေပါတယ် ။ နီရဲနေတဲ့အသားတွေ ၊ ငါးတွေနဲ့ ဟင်းသီး ဟင်း ရွက်တွေမှာတော့ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အရာတွေဖြစ်ပါတယ် ။
Ref : http://en.wikipedia.org/wiki/Gluten-free_diet
Labels: Diet, Family health, Gluten Free, Health Awareness, Health care, health education, Public health
July 15, 2011 1:46 AM
၁။ တားဆေးကို အချိန်အနည်းငယ် (သို့) တရက် နောက်ကျခြင်းကြောင့် ရာသီသွေးပြန်လာတာ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။
၂။ ဆက်ဆံချိန်တွင်းမှာ အနေထားတောင်ပြောင်းလို့ မရအောင် သားအိမ်တွင်း နာကျင်နေတာဟာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ပြီးတော့ ဆက်ဆံလိုစိတ် မရှိသလိုပါ ခံစားနေရတာကရော သက်ဆိုင်ပါသလား။
၁။ တားဆေး အမျိုးအမည် မသိရပါ။ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲဆေး ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ပဌမ ၂၁ ရက်သောက်ရမဲ့ ဆေးကို ရပ်လိုက်တာနဲ့ သွေးဆင်းတတ်တယ်။ Withdrawal bleeding ခေါ်တယ်။
၂။ Dyspareunia (Painful intercourse) လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာ နာစရာမဟုတ်ဘဲ နာတာကို နောက်ဆုံး ဆွီဒင် သုတေသန တခု အလိုအရ အမျိုးသမီးတွေ ၉့၃% မှာ ခံစားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အတွေ့အကြုံနည်းသူနဲ့ ငယ်ရွယ်သူတွေမှာ ပိုများတာလဲ တွေ့ရတယ်။ ဆေးခန်း-ဆေးရုံ ဆရာဝန် ပြပြန်တော့လဲ ပညာသယ်တိုင်းက ဒီအရေးမှာ အာရုံသိပ်မထားကြပြန်ဘူး။ မေးဘို့ ခက်နေ-ရှက်နေ သူတွေကလဲ အများသား။ Sexual counselling service ဆိုတာမျိုးကလဲ နေရာတိုင်းမှာမရှိ၊ ရှိပြန်ရင်လဲ ဈေးကြီးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်လဲ အထူးကု မဟုတ်ဘဲ၊ စပါယ်ရှယ် အကူအညီပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
• ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါအခြေအနေတွေက တဒါဇင်လောက်တော့ ရှိမယ်။ မဆိုးတာက အများစုဟာ တကယ်ဆိုးဝါးတဲ့ ဝေဒနာတွေ မဟုတ်ဘူး။
• တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်ကနေ မေးမယ်၊ စမ်းသပ်မယ်။ နာမယ်ဆိုတာ အဝကလား၊ အထဲကလား။ အဲ့ အမေးခံရသူက တခါတလေ ခွဲခြား မပြောနိုင်တာ ရှိတတ်တယ်။ မပြောချင်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။
• ၂ဝ၁၁ ထဲမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကွန်ဖရင့်စ် တခုမှာ Bristol Sexual Health Centre က အထူးကုဆရာဝန်တဦး အဆိုအရ အကြောင်းခံက Endometriosis ဆိုတဲ့ သားအိမ်ရောဂါသာဆိုရင် Position ဆက်ဆံပုံ အနေအထားပြုပြင်လို့ အများကြီး သက်သာနိုင်တယ်။
• Emotional factor ရောဂါတွေ မရှိဘဲနဲ့ စိတ်ပိုင်းမှာ ထူးခြားနေလို့ ဖြစ်သူတွေလဲ မရှားပါ။ နဲနဲနာရာကနေ ပိုပြီး မခံနိုင်အောင် တိုးလား-ဆိုးလာစေတာကလဲ စိတ်အခြေခံ ဖြစ်မယ်။ နောက်တကြိမ်ကိုတောင် ကြောက်နေအောင်အထိ စိတ်ဖိစီးမှု များနိုင်သေးတယ်။
• Vaginismus ဆိုတဲ့ မွေးလမ်းကြွက်သားတွေ ကျုံ့လို့ဖြစ်တဲ့ ရောဂါကို အရင်စဉ်းစားမယ်။ သူရှိနေရင် အဝမှာရော အတွင်းဘက်မှာပါ နာစေမယ်။ နာမှာလဲ ကြောက်နေမယ်။ နှစ်နဲ့အထိ ကြာနိုင်တယ်။ ဆိုးဝါးသူတွေမှာ ရာသီလာချိန်သုံးတဲ့ သေးသေးလေးအရွယ်သာရှိတဲ့ Tampons ထည့်တာတောင် မခံနိုင်ဘူး။ ဆရာဝန် လက်တချောင်းထည့်စမ်းတာဆို ဝေးရော။
• Vaginismus ဖြစ်နေလို့ နာတတ်သူဟာ အတူမနေချင်တာလို့တော့ ပြောမရပါ။ ကံကောင်းရင် ကလူကျီစယ်၊ ယုယမှုမျိုးကနေ Orgasm သာယာမှုအထိ ရနိုင်မယ်။
• ငယ်ငယ်ကတည်းက တင်းကြပ်တဲ့ မိဘ-ဆွေမျိုးအုပ်ထိန်းမှုကြောင့်လို့ အနောက်နိုင်ငံဆရာတွေက တွေးကြတယ်။ လူဆိုတာ မွေးကတည်းကနေ သင်ယူနေကြတာပါ။ ပွင့်လင်းမှု နည်းသေးတဲ့ တိုင်းပြည်ကလူတွေဟာ ဒီပညာမျိုးကို သူငယ်ချင်းတွေကနေ ရကြတာများတယ်။ သူငယ်ချင်းဆိုတာ ရောနေတာမို့ အိမ်က၊ ကျောင်းက မရာတဲ့ ပညာတွေတိုးမှာ အမှန်ဘဲ။
• Painful vaginal infections မွေးလမ်း ရောဂါပိုးဝင်တာက နောက်အကြောင်းခံတခု ဖြစ်တယ်။
• Unease with the partner အဖေါ်ကို သိပ်လိုလိုလားလား မရှိသလို ခံစားရတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မသိစိတ်မှာ အဲလို ဖြစ်တတ်တာလဲ ရှိမယ်။
• Cervix သားအိမ်အဝရောင်နေတာ။ အဲလိုရှိနေရင် အတွင်းနက်အထိ ဆက်ဆံမှုကြောင့်သာ နာမယ်။ Collision dyspareunia လို့ ခေါ်တယ်။
• Womb trouble သားအိမ်မှာ Fibroids အသားပိုရှိနေသူ တချို့မှာ အတွင်းနက် ဆက်ဆံမှုကနေ နာနိုင်တယ်။
• Endometriosis ရောဂါရှိနရင် အထူးသဖြင့် ရာသီလာချိန်နီးရင် ပိုနာတတ်တယ်။
• Ovary problems မျိုးဥအိမ်အလုံးဖြစ်နေတာ။ လူတိုင်းမှာတော့ မနာပါ။
• Pelvic inflammatory disease (PID) တင်ပဆုံတွင်း အင်္ဂါတွေရောင်နေတာ အဖြစ်များတယ်။ ရောဂါပျောက်ရင် ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ Chlamydia ပိုးဝင်တာ များတယ်။
• Ectopic pregnancy သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်တာ။
• Bladder infections ဆီးအောင့်နေရင်လဲ နာမယ်။
• Lack of lubrication ဆက်ဆံကာနီးထွက်ရမဲ့ အရည်နည်းတာ၊ မထွက်တာ။
• Nervousness စိတ်လှုတ်ရှားမှု ကဲတာ၊ ပြင်ဆင်မှု အားနည်းတာ၊ စိတ်ကို တင်းထားတာတွေကြောင့်လည့်း အရည်ထွက်ရမှာ နည်းနိုင်တယ်။ အတွေ့အကြုံ နည်းသူတွေ အဖြစ်များတယ်။
• Well-endowed partner အဖေါ်ယောက်ျားက ထူးထူးခြားခြား အင်္ဂါကြီးနေတာ။ တချို့ မွေးရာပါ မဟုတ်ဘဲ တမင်တကာ အပိုအဆာ၊ အပြင်အဆင်တွေ လုပ်ထားရင် ပုံမှန် မိန်းမအဂ်ါနဲ့ အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ ဗဂျိုင်းနား-ခန္ဓာဗေဒအရ အမျိုးသမီးဟာ စိတ်ကလဲ ပေါ်ပေါက်နေရင် ဘယ်လို ကျားအင်္ဂါနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မရ မရှိတတ်ပါ။ အရွယ်မတူတာ အတူနေရင် လိုအပ်ရင် ကျားအင်္ဂါအရင်းမျာ စွပ်ထားရတဲ့ ကွင်း Come Close ခေါ်တာ သုံးနိုင်တယ်။
• Menopausal or post-menopausal dryness သွေးဆုံးအမျိုးသမီးတွေ နာမှာ သေခြာတယ်။ Female sex hormones ဆေးပေး ကုသရင် နဂိုလိုနေနိုင်တယ်။ HRT pills ဖြစ်ဖြစ် Hormone cream (ခရင်မ်) ဖြစ်ဖြစ် သုံးနိုင်တယ်။ Ordinary sex lubricants သုံးတာ ပိုလွယ်သေးတယ်။
• Vaginal infections မွေးလမ်း ပိုးဝင်တာ အတော်များများ ရှိတယ်။ Thrush (Fungus) မှိုဝင်တာ သိပ်ပေါတယ်။ Trichomonas ပိုးလဲ ဝင်တယ်။
• Injury ထိခိုက်မိထားတာကိုလဲ စာရင်းသွင်းရတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကလေးမီးဖွါးတာလဲ ပါမယ်။ Tear စုပ်ပြဲတာ၊ Episiotomy
• Genital warts လိင်လမ်း-ကြွက်နို့။
• Vulvitis မိန်းမကိုယ်ရောင်တာ။ Bubble-baths ရေချိုးနည်းလုပ်လို့ ဓါတုဆေးနဲ့ မတည့်တာ၊ Soaps ဆပ်ပြာနဲ့ မတည့်တာကနေ ဖြစ်တတ်တယ်။
• Haematoma of the clitoris (အစိ) နေရာရောင်တာ၊ သွေးခြည်ဥနေတာ၊ အတွင်းခံ ကြပ်လွန်းတာ အကြာကြီး ဝတ်ထားရာကနေ အထဲမှာ သွေးယိုထွက်နေတဲ့လူနာ တွေ့ဘူးတယ်။
• Cancer ကင်ဆာ ဖြစ်နေလို့နာတာ ရှားလွန်းပါတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe4comments
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတိုင်းလူတိုင်း မွေးစကနေ သေဆုံးတဲ့အချိန်အထိ ဖျားနာခြင်းကို လူတိုင်း ကြုံတွေ့ဖူးကြမှာပါ ။ ခန္ဓာကိုယ် ကနေ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးဟာ ပုံမှန်ကဆင့် သွေဖီလာပြီဆိုရင်တော့ ဖျားနာခြင်းဆိုတာ ဟာ လက္ခဏာ တစ်ခုအနေနဲ့ ၀င်ရောက်လေ့ရှိပါတယ် ။ လူကြီးတွေမှာ fever ၀င်ပြီဆိုရင်မ သက်မသာ ခံစားရလေ့ ရှိပြီး ကိုယ်အပူချိန် 103' F (39.4 C) ထိ မရောက်ခင်အထိတော့ ဖျားခြင်းဟာ အန္တရာယ် သိပ်မရှိ လှပါဘူး ။ လူငယ်တွေနဲ့ မွေးကင်းစကလေးတွေမှာတော့ အပူချိန်လေး နည်းနည်းတက်ခြင်းမှာတောင်မှ ပြင်းထန်သော ပိုးဝင်မှု (Infection) ၀င်တာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ်အပူချိန်ဘယ်လောက်များရင် ရောဂါ ရဲ့ ပြင်းထန်မှု ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ အတတ်ပြော လို့မရပါဘူး ။ သာမန်ဖျားနာမှုလေးမှာလည်း ကိုယ်အပူချိန်အများကြီးတက်နိုင်သလို ပြင်းထန်တဲ့ ဖျားနာမှုတွေမှာလည်း အပူချိန်နည်းနည်းလေးပဲ ရှိနိုင်ပါတယ် ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ရက်အနည်းငယ်ကြာရင် ကိုယ်အ ပူချိန်ကျသွားလေ့ရှိပါတယ် ။ တခါတရံ ဘာဆေးမှ မသောက်ပဲ နေခြင်းကလည်းပိုပြီးကောင်းမွန်ပါတယ် ။ တကယ်တော့ ကိုယ်အပူချိန်တက်ခြင်းဆိုတာ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ပြင်ပမှဝင်ရောက်လာတဲ့ပိုးမွှားတွေကို ပြန်လည် တိုက်ထုတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ် Mechanism တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ။
သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဟာ ပုံမှန်ထက်အမြင့်မှာ ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ သင်ဟာ Fever ရှိနေပါပြီ ။ ပုံမှန်ကိုယ် အပူချိန်ဟာ 98.6'F ( 37 C) ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဖျားနာခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ဇစ်မြစ်အချက် အလက်တွေအပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေဟာလည်း ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ် ။ အဲဒါတွေကတော့
- မောပန်းနွမ်းနည်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ် ။
အပူချိန်တွေအရမ်းမြင့်တဲ့ 103'F (39.4C ) နဲ့ 106 ' F (41.1'C ) ကြားမှာဆိုရင်တော့
- ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပါတယ် ။
မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေမှာ ရှင်းပြလို့မရနိုင်တဲ့ Unexplained fever ဟာ လူကြီးတွေ ထက်ပိုပြီး အဖြစ်များ ပါတယ် ။ ကလေးငယ်ဟာ အပူချိန် 101'F (38.3 C) ထက်ပိုများလာပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ကိုခေါ် ဖို့လိုပါပြီ ။ အကယ်၍ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေရှိရင်လည်းဆရာဝန်ကို ပြဖို့လိုပါတယ် ။
- ၃ လအောက်ကလေးငယ်တွင် ဖျားနာခြင်း
- အစာကျွေးခြင်း နို့တိုက်ခြင်းအား ငြင်းဆန်နေခြင်း
- ကိုယ်အပူချိန်ကြီးပြီး ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်နေခြင်း (ဥပမာ အောက်ခံ diaper လဲပေးသည့်အချိန်တွင် ပြင်းထန်စွာ ကန်ကြောက် ၍ ငိုခြင်း)
- ကိုယ်အပူချိန်ကြီးပြီး မှိန်းနေခြင်း ( ကလေးငယ်တွေနဲ့ ၂ နှစ် အောက်ကလေးတွေမှာ ဒါဟာ ဦးနှောက် အမြှေးယောင်ခြင်း Meningitis ရဲ့လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ Meningitis ဆိုတာ Spinal cord နဲ့ ဦးနှောက်ကို ကာရံထားတဲ့ အမြှေးပါး membrane နဲ့ အရည်တွေမှာ ပိုးဝင်ပြီး ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ သင်ရဲ့ကလေး ငယ်ဟာ meningitis ဖြစ်နေတယ်လို့ သံသယရှိရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီအမြန်ပြသဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ ။
- မွေးကင်းစကလေးငယ်တွင် ပုံမှန်အပူချိန်ထက်နည်းနေခြင်း ( 97'F - 36.1 C ထက် နည်းနေခြင်း ကိုဆိုလို ပါတယ် ။ ကလေးငယ်တွေဖျားနာရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အပူချိန်ကို ထိမ်းမထားနိုင်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ပူတာ လည်းဖြစ်နိုင် သလို အေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် )
အကယ်၍ သင့်ကလေးငယ်ဟာ ခဏခဏ အန်နေပြီဆိုရင် ၊ အပူချိန်ဟာ ရက်ကြာရှည်နေ ပြီဆို ရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသတာအကောင်းဆုံးပါပဲ ။ ဆက်လက်ပြီး တော့ ဖျားနာခြင်းနဲ့အ တူအောက်ပါ လက္ခဏာ များ ပါရှိလာရင်တော့ သတိထားပြီး ဆေးကုသမှုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
- အရေပြားတွင်အကွက်များပေါ်ခြင်း ၊ ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်း
- တောက်ပသော အလင်းရောင်များအား ဓါတ်မတည့်ခြင်း
- လည်ပင်းခိုင်ခြင်း လည်ပင်းအရှေ့သို့ကွေးမရခြင်း
- အသက်ရှူခက်ခဲခြင်း ၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း ၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း
- ဗိုက်အောင့်ခြင်း ၊ ဆီးသွားစဉ်နာကျင်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ် ။
သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဟာ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် ။ မနက်ပိုင်းမှာ အပူချိန် ကျပြီး နေ့လည်နဲ့ညနေတွေမှာ အပူချိန်များနိုင်ပါတယ် ။ တကယ်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်အပူချိန်ဟာ ၉၇ ဖာရင်ဟိုက် ကနေ ၉၉ ဖာရင်ဟိုက်အတွင်းမှာ ရှိနေနိုင်ပါတယ် ။ လူအချို့ကတော့ ၉၈.၅ ဖာရင်ဟိုက် ကျော်ရင် ဖျားနာပြီလို့ သတ်မှတ်လေ့ရှိကြတယ် ။ ဒါပေမယ့် သွေးဆင်း ချိန်ကာလအတွင်း နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအပြင်းအ ထန်လုပ်နေချိန် အတွင်းမှာလည်း သင့်ရဲ့အပူချိန်တက်နိုင်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ ။ ဖျားနာခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင် တဲ့အချက်တွေကတော့
- ဗိုင်းရပ်နဲ့ ဘတ်တီးရီးယားပိုးမွှားများဝင်ရောက်ခြင်း
- နေပူရှိန်ထဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာနေခြင်း
- လေးဖက်နာ အဆစ်မြစ်နာများရှိခြင်း
- ကင်ဆာ အဖုအကြိတ်များရှိခြင်း
- အတက်ကျဆေးနှင့်သွေးပေါင်ကျဆေး များ ၊ ပိုးသတ်ဆေးများသောက်သုံးနေခြင်း
- ဆုံဆို့ကြက်ညှာ မေးခိုင် စသည့် ကာကွယ်ဆေးများထိုးခြင်း
တခါတရံမှာ ဖျားနာခြင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ခွဲခြားနေဖို့မလိုပါဘူး ။ အပူချိန် ၁၀၁ ဖာရင်ဟိုက်ကျော် သွားရင် ဒါမှမဟုတ် သုံးပတ်ထက်ပိုပြီးဖျားနေရင် ဒါဟာ ဆရာဝန်ကလည်း ဘာမှ ရောဂါဇစ်မြစ်ရှာလို့မရတဲ့ ( Pyrexia of Unknow origin - PUO ) လို့ သတ်မှတ်ပါတယ် ။
ဖျားနာခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေထဲမှာ ရေဓါတ်အလွန်အမင်းဆုံးရှုံးခြင်း ၊ ထင်ယောင်ထင်များဖြစ်ခြင်း ၊ သတိလစ်၍ တက်ခြင်းစတာတွေဖြစ်နိုင်ပါ့တယ် ။ အဖျားကြီးပြီးတက်တယ်ဆိုရင်တော့ Febrile seizures လို့ခေါ်ပါ တယ် ။ တက်တဲ့အခါမှာ သတိလစ်ပြီးတော့ ခြေလက်တွေ တုန်ယင်ပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ အချိန်မကြာမြင့်စေ ဖို့ အောက်ပါအချက်တွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် ။
- ကလေးကို အစာအိမ်ကို ကြမ်းပြင်ဖက်ထားပြီး လဲလျောင်းထားပါ ။
- ကလေးအနီးအနားမှ ချွန်ထက်သော အရာများကိုဖယ်ရှားပေးပါ ။
- တင်းကြပ်သောအ၀တ်အစားများကို ဖယ်ပါ ။
- ကလေးငယ်ကို ဒါဏ်ရာရစေခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ ။
- ကလေးငယ်ရဲ့ပါးစပ်ထဲကို မည်သည့်အရာမှ မ၀င်ပါစေနဲ့ ။ တက်ခြင်းကို ရပ်တန့်အောင် ကြိုးစားပါ ။
Seizures အများစုဟာ သူ့ဘာသာသူ ပြန်ရပ်သွားတာများပါတယ် ။ ကလေးကို တက်ပြီးပြီးချင်း ဖြစ်စေတဲ့မူရင်း ဇစ်မြစ်ကိုသိအောင် ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ပြသဖို့လိုပါတယ် ။ တက်တာဟာ ၁၀ မိနစ်ကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့ အရေးပေါ် ခေါ် ဖို့လိုနေပါပြီ ။
ဆရာဝန်က သင့်ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာနဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာလား သာမန် လား ဆိုတာ ခွဲခြားပါလိမ့်မယ် ။ ဒါကြောင့် သွေးစစ်တာလောက်တော့လုပ်ဖို့လိုပါတယ် ။ သုံးပတ် ထက်ကျော် ပြီးငွေ့ငွေ့လေးဖျားနေတယ် ပြီးတော့ ဘာလက္ခဏာမှလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံးလုပ် ရမှာကတော့ သွေးစစ်တာနဲ့ ဓါတ်မှန်၇ိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
အဖျားအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်က ကိုယ်အပူချိန်ကို အလျှင်စလို ချပစ်လေ့မရှိပါဘူး ။ လက္ခဏာတွေပြပြီး အဖျားကြာရှည်မှသာလျှင် ရောဂါရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို သိဖို့ ခက်ခဲလေ့ရှိပါတယ် ။ ကျွမ်းကျင် သူတွေကတော့ ကိုယ်အပူချိန်ကို အလွန်အမင်းချပစ်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ် ။ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကလည်း ဖျားနာခြင်းကိုဖြစ်စေပြီး တခြား အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာပိုးဝင်တာတွေကိုဖြစ်စေပါတယ် ။ အဖျားအရမ်းကြီးရင်တော့ အောက်ပါဆေးတွေကို သုံးစွဲနိုင်ပါတယ် ။
- ပါရာစီတမော ၊ ibuprofen ( ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ သုံးစွဲသင့်ပါတယ် ၊ အများကြီးသောက် သုံးခြင်း ကို ရှောင်ရှားရပါမယ် ။ ပါရာစီတမောကို အများကြီးသောက်သုံးခြင်းနဲ့ ရေရှည်သောက်ခြင်းဟာလည်း အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေပါတယ် ။ ဆေးသောက်လွန်သွားရင် သေနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ အဖျား ၁၀၂ အောက် မှာတော့ အဖျားကျဆေးတွေကို ဆရာဝန်ရဲ့အကြံဥာဏ်မပါပဲ တိုက်ကျွေးလို့ရပါတယ် ။
- Aspirin ( လူကြီးပဲတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ကလေးတွေကို တိုက်လို့မရပါဘူး ။ ရှားပါးတဲ့ သေနိုင်တဲ့ Reye's syndrome ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ကိုယ့်ရဲ့ ဖျားနာခြင်းဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကိုမူတည်ပြီးဆရာဝန်က ပိုးသတ်ဆေးတွေညွှန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အထူး သဖြင့် နမိုးနီယားနဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းတွေမှာဖြစ်ပါတယ် ။ Antibiotic တွေဟာ ဗိုင်းရပ်ပိုးဝင်ခြင်းကို မကုနိုင်ပါဘူး ။( ဥပမာ Gastroenteritits and mononucleosis ရောဂါတွေဖြစ်ပါတယ် ) Virus ကိုကု ဖို့ antiviral ဆေးတွေတော့ရှိပါတယ် ။ ဗိုင်းရပ်ဝင်တာကိုအကောင်းဆုံးကုသခြင်းကတော့ တခါတရံ အနား ယူပြီး အရည်ရွှမ်းတဲ့အသီးတွေစားသုံးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။
၁ ။ အရည်ရွှမ်းတဲ့သစ်သီးတွေစားပါ ( အရည်ဆုံးရှုံးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး တစ်နှစ်အောက် ကလေး ငယ်တွေမှာ ကလေးဓါတ်ဆားတွေသောက်ဖို့လိုပါတယ် ။ ဒီလို ဓါတ်ဆားတွေမှာ ရေနဲ့ electrolytes တွေ အချိုးကျပါဝင်ပါတယ် ။
၂ ။ အနားယူပါ ။( ကောင်းကောင်းအနားယူဖို့လိုပါတယ် လှုပ်ရှားမှုများခြင်းဟာလည်း အပူချိန်ကို တက်စေ ပါတယ်)
၃ ။ ရေပတ်တိုက်ပေးပါ ။ ( ရေနွေးနွေးနဲ့စိမ်ထားတဲ့ ရေပတ်ဝတ်နဲ့ ကိုယ်အပူချိန်ကျအောင်တိုက်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ အကယ်၍ ရေပတ်တိုက်ရင်းနဲ့ချမ်းတုန်လာရင်တော့ ရေပတ်တိုက်တာကိုရပ်လိုက်ပါ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ချမ်းတုန် တယ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအပူချိန်တွေမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီး ကြွက်သားတွေကို အပူ ထွက်အောင် လှုပ်ခါနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
အကောင်းဆုံးနဲ့ဖျားနာခြင်းကိုကာကွယ်တဲ့နည်းကတော့ ရောဂါပိုးမွှားတွေ ထိတွေ့မှု နည်းအောင်နေ ထိုင်ခြင်းဖြစ် ပါတယ် ။ ရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ လက်ခဏခဏဆေးခြင်းပါပဲ ။ ကလေးတွေကို ကစားပြီး တိုင်း အစာ မစားခင် အိမ်သာမှ ဆင်းလာတိုင်း ကြမ်းပြင်ပေါ်တွားတွား ဆော့ကစားတိုင်း လက်ဆေးပေးဖို့ လက်ဆေးဖို့ အကြံဥာဏ်ပေးဖို့လိုပါတယ် ။ ကလေးတွေကို ဖုန်မှုန့်သဲတွေ နဲ့ဆော့ ကစားပြီး တိုင်း နှာခေါင်း ပါးစပ်နဲ့မျက်လုံးတွေကို မထိမိအောင် သင်ကြားပေးဖို့လိုပါတယ် ။ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ကတော့ ကလေးတွေကို လူအစုအဝေးထဲသွားတဲ့အခါ ချောင်းဆိုးခြင်း ၊ နှာချေခြင်းနဲ့ကြုံရ တဲ့အခါနှာခေါင်းကို cover လုပ်ထားဖို့ သင်ကြားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။
Ref : http://www.mayoclinic.com/health/fever
Labels: Family health, fever, Health care, health education, Immunology, Public health
အမျိုးသမီးတွေအတွက် ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ရာ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာဟာ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ် မှာ အတော်လေးကို ရေပန်းစားလို့လာပါပြီ ။ သားအိမ်ကင်ဆာကို ဆေးပညာအရဆိုရင် Endometrial cancer လို့ခေါ် ပါတယ် ။ သားအိမ်ခေါင်း cervix မှာ ဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာကိုတော့ cervical cancer လို့ခေါ်ပါတယ် ။ Endometrial cancer ဟာ သားအိမ် ( Endometrium) မှ တဆင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ Malignancies ကင်ဆာမျိုးနွယ် ပွားတွေဖြစ်ပါတယ် ။ သားအိမ် Uterus နဲ့ သူ့ရဲ့ lining အနားသတ်တွေမှာဖြစ်ပွားပါတယ် ။ United States မှာဆိုရင် နှစ်စဉ် ၃၅၀၀၀ သော မိန်းမတွေဟာ သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ အဖြစ်အများဆုံး အမျိုး သမီးရော ဂါတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ အဖြစ်အများဆုံးပုံစံဖြစ်တဲ့ Endometrioid adenocarcinoma မှာ သွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ် ။ ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေမှာ ပထမဆုံး သားအိမ်နံရံတွေ ထူလာခြင်း Endometrial hyperplasia စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သွေးဆင်းခြင်း Vaginal bleeding နဲ့ present လုပ်ပါတယ် ။ သားဥအိမ်ကင်ဆာနဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာပြီးရင် တတိယအဖြစ်အများဆုံး အမျိုးသမီး မီးယပ်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးမှု နံပတ် ၃ အဆင့်မှာ တည်ရှိပါတယ် ။ သားအိမ်တစ်ခုလုံးထုတ်ပစ်ခြင်း (TAH - Total Abdominal Hysterectomy ) နဲ့ ဘေးနှစ်ဖက် သားဥအိမ်နှင့် သားအိမ် သားဥအိမ် ဆက်လမ်းကြောင်း တို့အား ရှင်းလင်းဖယ်ထုတ်ခြင်း ( Bilateral salpingo-oophorectomy ) တို့ ပြုလုပ်ရပါတယ် ။
Endometrial cancer ကို တခါတရံမှာ Uterine cancer လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း မတူညီတဲ့ ကင်ဆာတွေ ဟာ သားအိမ်အတွင်း endometrium မှသာလျှင်မကပဲသားအိမ်ရဲ့ အခြား တစ်ရှူးတွေ ကနေ လည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ် ။ ဥပမာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ cervical cancer , သားအိမ်ကြွက်သား myometrium မှ ဖြစ်သော Sarcoma of the myometrium နဲ့ trophoblastic ရောဂါတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
An endometrial adenocarcinoma invading the uterine muscle
Endometrial cancers အများစုဟာ adnocarcinomas တွေဖြစ်ကြပြီး ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ တစ်လွှာ တည်းဖြစ် တဲ့ epithelial cells တွေကနေ စတင်ပါတယ် ။ Epithelial cells တွေဟာ Endometrium နဲ့ Endometrial glands တွေ ကို ပိုင်းခြားထားပါတယ် ။ Endometrial carcinoma ကို မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ကြည့်ပြီး ခွဲခြားလို့ရတဲ့ subtypes များစွာရှိပါတယ် ။ အဖြစ်အများဆုံးကတော့ Edommetrioid type ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီ ပုံစံမှာဆိုရင် ကင်ဆာဆဲလ်တွေဟာ ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ papillary serous carcinoma နဲ့ clear cell endometrial carcinomas တို့နဲ့ကွာခြားပါတယ် ။ ကဲဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရအောင် ။
Type I - ဒီအမျိုးအစားဟာည သွေးဆုံးခါနီးအမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ တခါတရံ estrogen (အမျိုးသမီး ဟော်မုန်း ) တွေများလာခြင်းနဲ့အတူ သားအိမ်နံရံထူလာခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ရပါတယ် ။ သားအိမ်နံရံ ကို အနည်း ငယ်ဖောက် ထွင်းဝင်ရောက်ပြီး low grade endometrioid type ဖြစ်ပါတယ် ။ Prognosis ဆိုတဲ့ ရော ဂါ ကြောင် ဆက်လက်အသက်ရှင်နိုင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက် ကောင်းပါတယ် ။
Type II - ဒီအမျိုးအစားကတော့ အသက်ပိုကြီးတဲ့ သွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီးတွေမှာ တွေ့ရပါတယ် ။ African-Americans တွေ မှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ် ။ estrogen များလာမှု နဲ့ဆက်နွယ်မှုမရှိပဲ Prognosis မကောင်းပါဘူး ။ Type II မှာ ပါဝင်တာတွေကတော့
the high-grade endometrioid cancer,
the uterine papillary serous carcinoma,
the uterine clear cell carcinoma စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိတဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာ နောက်တစ်မျိုးကတော့ Endometrial stromal sarcomas ဖြစ်ပြီး အဲဒီကင်ဆာ ကတော့ ကလန်းန် တွေမဟုတ်တဲ့ connective တစ်ရှူးတွေကနေ စတင်ဖြစ်ပေါ်ပါတယ် ။ Uterine carcinosarcoma ကို Malignant mixed mullerian tumor လို့လည်းခေါ်ပါတယ် ။ ရှားပါးတဲ့ သားအိမ်ကင် ဆာမျိုးဖြစ်ပြီး ကင်ဆာဆဲတွေ လွန်စွာပျံ့နှံ့ပြီး အဲဒီလို ကင်ဆာမျိုးမှာ ဆဲလ်ရဲ့မူရင်းဇစ်မြစ်ကို မသိရှိရပါဘူး ။ မိုက်ကရိုစကုပ်နဲ့ကြည့်ပြီး တော့အောက်ပါအတိုင်းလည်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Histological types I - အဖြစ်အများဆုံးကတော့ Endometrial Adenocarcinoma ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အဆင့် ၃ ဆင့်ရှိပါတယ် ။ Grade I ကတော့ ဆဲလ်တွေကို ကောင်းစွာ ခွဲခြားရနိုင်တဲ့ highly differentiated ဖြစ်ပါတယ် ။ Grade II ကတော့ moderatley differentiated ဖြစ်ပြီး Grade III ကတော့ Undifferentiated ဆဲလ်တွေကို ခွဲခြားမရနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ် ။
Histological types II - Adenocanthoma
Histological types III - Adenosquamous carcinoma Malignant glandular element + malignant squamous element high grade malignancy
Histological types IV - Carcinosarcoma Highly malignant စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ် ။
- သွေးဆင်းခြင်း ၊ သွေးဆုံးပြီးအမျိုးသမီးတွေမှာတော့ spotting လို့ခေါ်တဲ့ တစ်စက် နှစ်စက်လောက် ပဲဆင်းနိုင်ပါတယ် ။
- မူမမှန်သွေးဆင်းခြင်း ၊ မူမမှန်သွေးဆင်းကာလများ
- အသက် ၄၀ ကျော်သွေးဆုံးခါနီးအမျိုးသမီးများတွင် ပုံမှန်သွေးဆင်းကာလ ကြား ကာလများ တွင် သွေး ဆင်းခြင်း ။ နေ့ရက်ကြာရှည်စွာသွေးဆင်းပြီး ပမာဏများခြင်း ၊ ခဏခဏ သွေးဆင်းခြင်းစသည်တို့ဟာ ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင် တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ် ။
- သွေးအားနည်းခြင်း ( ရက်အကြာကြီး သွေးဆုံးရှုံးတဲ့အတွက်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်
- ၀မ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းနာကျင်ခြင်း ၊ တင်ပဆုံအတွင်းပိုင်းတွင် ညှစ်ဆွဲထားသလို နာကျင်ခြင်း
- အဖြူရောင်သို့မဟုတ် အရည်ကြည်များဆင်းခြင်း ( သွေးဆုံးပြီးအမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်ပါတယ် ။ )
ဖြစ်ပွားစေတဲ့အချက် Risk Factor တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ် ။ အဲဒါတွေကတော့
- သားဥအိမ်တွင် အရည်အိတ်များစွာတည်ခြင်း ( Polycystic ovary syndrome)
- ကလေးတစ်ယောက်မှမမွေးဖူးသော Nulliparity ( ကိုယ်ဝန်မဆောင်ဖူးခြင်း )
- မျိုးမပွားနိုင်ခြင်း (မြုံနေခြင်း)
- အပျိုဖော်ဝင်ချိန်စောခြင်း (early menarche)
- သွေးဆုံးချိန်နောက်ကျခြင်း (Late menopause)
- သားအိမ်အတွင်းနံရံအဖုများပါခြင်း Endometrial polyps
- Taxmoifen ဆေးသုံးနေခြင်း
- တိရိစ္ဆာန်အဆီများစွာ စားသုံးခြင်း
- တင်ပဆုံအား ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးကုသဖူးခြင်း
- သားဥအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်ခြင်း
- အသက် ၃၅ နှစ်အထက်အမျိုးသမီးများ
- နေ့စဉ် အရက်များစွာ သောက်သုံးခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ် ။
စစဖြစ်ချင်းမှာ ကုသလို့ရတဲ့အတွက် Routine screening လုပ်ဖို့တော့မလိုပါဘူး ။ အစောပိုင်းအဆင့်တွေမှာ စမ်းသပ်မှုရဲ့ အဖြေက ပုံမှန်တွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ။ ရောဂါပိုပြင်းထန်လာမှသာလျှင်သားအိမ်ရဲ့ အရွယ်အစား ၊ ပုံသဏ္ဍာန် ၊ အပျော့အမာစတဲ့လက္ခဏာတွေပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
၁ ။ Pap smear ယူခြင်း
၂ ။ သားအိမ်ခြစ်ပြီး အသာစ စစ်ဆေးခြင်း ( သားအိမ်အတွင်းပိုးနှင့်သားအိမ်ခေါင်း အပါအ၀င် )
၃ ။ သားအိမ်ခြစ်ခြင်း Endometrial curettage ဟာ အဆင်မပြေခဲ့ရပင် Dilation and Curettage ( D&C) သား အိမ်ခေါင်းချဲ့ပြီးအတွင်းပိုင်းအား ခြစ်ယူခြင်း ။
၄ ။ သားအိမ်အတွင်းမှန်ပြောင်းထည့်စစ်ဆေးခြင်း ( Hysteroscopy ) ။ တခါတည်းသားအိမ်အတွင်းစယူပြီး biopsy လုပ်နိုင် ပါတယ် ။ D and C လုပ်သလို မမြင်မစမ်းလုပ်နေစရာမလိုပဲ သေချာ မသင်္ကာတဲ့နေရာတွေကို ယူနိုင်ပါတယ် ။
၅ ။ Endometiral biopsy or aspiration
၆ ။ မိန်းမကိုယ် အတွင်းပိုင်းအာ အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း ( Transvaginal ultrasound)
၇ ။ အခုနောက်ပိုင်း TruTest လို့ခေါ်တဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပေါ်လာပါတယ် ။ ကျုဲံ့လို့ကွေးလို့ရတဲ့ Tao Brush နဲ့ သားအိမ် ရဲ့ entire lining ကိုခြစ်ယူပါတယ် ။ နာကျင်မှုသက်သာပြီး စမ်းသပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ တစ်ရှူးတွေရ ရှိပါတယ် ။ ရိုးရှင်းပြီး သက်သာပါတယ် ။ TruTest ကိုတခါတရံမှာအသုံးပြုပြီး အများစုကတော့ Pap smear ကိုသာ အသုံးများပါတယ်။
၈ ။ Serum p53 antibody ကိုတိုင်းတာခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ် ။
ပထမဆုံးကုသခြင်းကတော့ Srugical ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အနည်းဆုံး ၀မ်းဗိုက်အတွင်းအရည်ယူမယ် (Peritoneal fluid ကို ယူပြီး cytologic sampling လုပ်ခြင်း ) ၊ ဗိုက်ဖွင့်ခြင်း ၊ lymph nodes များအားစမ်းသပ်ပြီး biopsy ယူခြင်း ၊ သား အိမ်ကို ထုတ်ခြင်း ၊ သားဥအိမ် ၂ လုံးထုတ်ခြင်း ၊ Lymph node များထုတ်ခြင်း ၊ စသည်တို့ဖြစ် ပါတယ် ။ တခါတရံ သားအိမ်ခေါင်းအထိပါ ပျံ့နှံနေပြီဆိုရင်တော့ သားအိမ်ခေါင်းပါ ထုတ်ပစ်ရလေ့ရှိပါတယ် ။ သားအိမ်ကို ၀မ်းဗိုက်ဖွင့်ပြီး ထုတ်ခြင်း (Abdominal hysterectomy ) နဲ့ မိန်းမကိုယ်အတွင်းမှ အဆင့်လိုက် ထုတ်ပယ်ခြင်း ( vaginal hysterectomy ) ဆိုပြီး ရှိပါတယ် ။ အဆင့် ၁ သည် ခဏခဏပြန်ဖြစ်ဖို့ များပါတယ် ။ အဆင့် ၂ ကိုတော့ ခွဲစိတ်ပြီး ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးပါတယ် ။ အချို့ လူနာတွေမှာတော့ ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်း Chemotherapy ကိုပေး ပါတယ် အထူးသဖြင့် အဆင့် ၃ နဲ့ ၄ မှာဖြစ်ပါတယ် ။ Endometrial stromal sarcomas အ တွက် Hormonal therapy ဖြစ်တဲ့ progestins နဲ့ antiestrogen တွေပေးပါတယ် ။
Herceptin လို့ခေါ်တဲ့ Antibody ကိုတော့ HER2/neu protein နဲ့ overexpress လုပ်ဆတဲ့ ရင်သားကင် ဆာကုသ တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ် ။
ကုသခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ complication များ
- D&C လုပ်ရင်းနဲ့သားအိမ်ပေါက်ထွက်ခြင်း ( Uterine perforation ) ရနိုင်ပါတယ် ။
- Asherman's syndrome (သားအိမ်အတွင်းပိုင်းကပ်ငြိတွယ်ခြင်း ) Intrauterine adhesion ရနိုင်ပါတယ် ။ D&C လုပ်တဲ့ အခါ complication အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ် ။ အကျိုးဆက်ကတော့မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းနဲ့ နောက်ပိုင်း ကလေးမွေးတဲ့ အခါ အခက်အခဲမျိုးစုံ Obstetric complications တွေနဲ့ ကြုံရနိုင်ပါတယ် ။
Ref : http://en.wikipedia.org/wiki/Endometrial_cancer
Labels: Endometrial carcinoma, health education, Public health
ယနေ့ ၂၁ ရာစုခေတ်ကြီးမှာ အမျိုးသမီး တစ်ကိုယ်ရည် ကျန်းမာသန့်ရှင်းမှုအတွက် လိုးရှင်းတွေ ၊ သန့်စင် ရည်တွေ ဟာ တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး မရိုးရအောင် အပြိုင်အဆိုင် ထွက်ပေါ်လို့ လာနေပါပြီ ။ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် မိန်းမကိုယ် သန့်ရှင်းရေးဆေးကြောအရည်တွေဟာလည်း ဈေးကွက်ထဲမှာ အမျိုးအစားစုံလင်စွာ နဲ့ အလွယ် တကူ ၀ယ်ယူရရှိနေနိုင်ပါပြီ ။ မိန်ကလေးတွေအများစု ယုံကြည်နေတဲ့အချက်ကတော့ တစ်ကိုယ် ရည်သုံး လိုးရှင်းတွေသန့်စင်ရည်တွေဟာ ကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်တယ် သန့်ရှင်းစင်ကျယ်စေတဲ့ ဖက်ရှင် (Cleaning fashion) တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ ။ ခန့်မှန်းချက်အရကတော့ United states မှာဆိုရင် အမျိုး သမီး ၂၀ မီလီယံလောက်ဟာ Health care lotion လို့ခေါ်တဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး လိုးရှင်းတွေကို တခါတရံ အ သုံးပြုကြပြီး ၊ အာဖရိကနဲ့ အာရှတွေမှာဆိုရင်တော့ အသုံးများပါတယ် ။ ဒီလိုလိုးရှင်းတွေကို အသုံးပြုကြ တာဟာ တကယ်ပဲ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေသလား ဒါမှမဟုတ် ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေ သလား ဆိုတာ ပညာရှင်တွေက ဆေးပညာဆိုင်ရာ လေ့လာစမ်းသပ်မှု Medical Research တွေပြု လုပ်နေ ကြပြီဖြစ် ပါတယ် ။
သားအိမ်ခေါင်း ၊ သားအိမ်အတွင်းပိုင်းနဲ့ mucosa ၊ မိန်းမကိုယ်နံရံတွေမှာရှိတဲ့ microbes လို့ခေါ်တဲ့ အဏုကြည့် မှန်ပြောင်းကိရိယာဖြင့်သာမြင်နိုင်တဲ့ပိုးမွှားတွေကို vaginal flora က ပုံမှန်အတိုင်းသဘာဝအလျှောက် သန့် စင်ဆေးကြောပေးပါတယ် ။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့သဘာဝ vaginal flora မှာ ပြင်ပပိုးမွှားတွေကို ကာကွယ် တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုဘတ်တီးရီးယား lactic acid bacteria တွေ 80 million/ml လောက်အထိပါဝင်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ အဓိက တာဝန်ကတော့ ပြင်ပကနေ ပိုးမွှားတွေ လွယ်လွယ် ကူကူ ၀င်ရောက်နိုင်ခြင်း ကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့ ဖြစ်ပြီး lactic acid bacteria တွေကို Guardian of health အဖြစ်တင် စားပြောဆိုကြပါတယ် ။ Lactobacillus တွေများစွာပါဝင်တဲ့ အမျိုးသမီးမိန်းမကိုယ်ထဲက ထွက်တဲ့ အရည်တွေဟာ မိန်းမကိုယ်ကို ဘသာဝအလျှောက် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်း ( self cleaning function) ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ် ။ လေ့လာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုရဲ့အဖြေအရ မျိုးပွားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အသက် ၄၀ အရွယ်အမျိုး သမီးတွေ မှာ lactobacillus ၉၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပြီး ၊ အသက် ၆၀ အရွယ်မျာတော့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ ပါဝင် ပါတော့ တယ် ။ ဒါကြောင့် မိန်းမကိုယ်မှာ အမျိုးသမီး သန့်စင်ဆေးရည်တွေကို ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းဟာ Lactobacillus ပါဝင်မှုပမာဏကို လျော့နည်းသွားစေနိုင်ပါတယ် ။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀ က ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အမျိုးသမီး မိန်းမကိုယ်ဆေးကြောရည် စမ်းသပ်မှု (women's vaginal washing the report) အရ တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်ဆေးကြောခြင်း သို့မဟုတ် ဒီထက်ပို ပြီး အကြိမ် အရည် အတွက်များစွာ ဆေးကြောခြင်းဟာ တင်ပဆုံအတွင်းပိုင်း ပိုးမွှားဝင်ရောက်မှု ( pelvic infection ) ကိုပို များစေခြင်း ၊ နေရာလွှဲမှား သန္ဓေသား ပြဿနာ ( ectopic pregnancy ) ကို များပြားစေခြင်း ၊ ပိုးမွှား ၀င်ရောက်စေ မှု များပြားစေခြင်း စသည်တို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် ။ American Journal of Public Health မှ report အ ရ မိန်းမကိုယ်ထဲမှာ အရည် vaginal fluid မရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပုံမှန် မိန်းမကိုယ်ထဲ အရည်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထက် Pelvic infection ဖြစ်ပွားစေတဲ့ နှုန်းကို ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းထိ ပိုများတယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် အမျိုးသမီးမိန်းမကိုယ်အရည်ရဲ့ မိမိဘာသာ သန့်ရှင်း စင်ကြယ်စေခြင်း ဆိုတဲ့ self cleaning function ပျက်ဆီးသွားပြီး သားအိမ်ခေါင်း ၊ သားအိမ် ၊ fallopian tube ( သားအိမ်နှင့် သားဥအိမ်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းကြောင်း ) စသည်တို့မှဆင့် ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ၀င်ရောက်စေပြီး pelvic infection ကို ဖြစ်ပွားစေပါတယ် ။
လူအများစုကတော့ လိင်ဆက်ဆံမှုများတဲ့အမျိုးသမီးတွေ ဟာ ကိုယ်ဝန်ကို တားဆီးနိုင်ဖို့ တကိုယ်ရည်သုံး သန့်စင်ဆေး ရည်တွေကို သုံးစွဲကြတယ်လို့ မှားယွင်းယုံကြည်နေကြပါတယ် ။ နောက်တစ်ခုကတော့ အမျိုးသမီး သန့်စင်ဆေးရည်တွေကို အသုံးပြုတာ ပိုးမွှားဝင်ရောက်တာကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ၊ လိင်မှတဆင့် ကူးစက် တတ်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ၊စတဲ့ရည်ရွယ် ချက်အများအနေနဲ့သုံးစွဲကြပါတယ် ။ ဒါပေ မယ့် ဆေးပညာ လေ့လာစမ်းသပ်မှု အဖြေအရတော့ အားလုံးဟာ ဆန့်ကျင်ဖက်တွေပါပဲ ။ အင်ဒိုနီးရှားမှ ဆရာဝန်တွေ ဟာ မီးမဖွားခင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် ၅၉၉ ယောက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ မိန်းမကိုယ် သန့်စင်ဆေးရည်တွေကို လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် ရည်ရွယ် ချက်နဲ့သုံးစွဲပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ ဖြစ်ပွားနိုင်မှု risk ကိုပိုများစေပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း သာမန်မိန်းမ ကိုယ်ကို ရေနဲ့ ဆေးကြောခြင်းကတော့ အန္တရာယ်မရှိစေပါဘူး ။ လေ့လာမှု ဆာဗေးတွေရဲ့ အဖြေအ ရတော့ မိန်းမကိုယ်ရဲ့ အက်ဆစ်ဓါတ် PH မျှ ခြေ ပျက်ဆီးသွားခြင်းဟာ လိင်မှတဆင့် ကူးစက် တတ်သော ရောဂါ များကိုပိုများစေပါတယ် ။ ရေကတော့ မိန်းမကိုယ်ရဲ့ အက်ဆစ်မျှခြေကို မပြောင်း လဲစေ ပါဘူး ။ ဒါ့အပြင် ပုံမှန် vaginal flora ကိုလည်း မပျက်ဆီးစေပါဘူး ။
American scholars တွေဟာ လက်ထပ်ပြီးသားစုံတွဲ ၈၄၈ ယောက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့အခါ မိန်းမကိုယ် သန့်စင်ဆေး ရည်နဲ့ သုံးစွဲခြင်းဟာ တစ်လမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှု ကို ၃၀% ထိလျော့နည်းသွားစေနိုင်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့် လည်း ဆိုတော့ vaginal acidity ပြောင်းလဲသွားခြင်း ၊ micro-ecological ပတ်ဝန်း ကျင် ပြောင်းလဲ သွားခြင်း ၊ ရောဂါပိုးမွှားများပေါက်ဖွားကြီးထွားရင် သင့်တော်ခြင်း ၊ ဒါ့အပြင် ရောဂါတစ်ခု ခုဖြစ်စေဖို့ လည်း ဦး တည်နိုင်ပြီး နောက်ဆုံး infertility လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးမပွားနိုင်ခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ယေဘူ ယျကြည့် မယ်ဆိုရင် မိန်းမကိုယ်ဟာ သူ့ဘာသာသူ အလိုအလျောက်သန့်စေစေခြင်း self cleaning feature ပါရှိတဲ့ အတွက် မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည်တွေသုံးစွဲဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး ။
မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည်တွေကို ဘယ်အချိန်တွေမှာ သုံးစွဲဖို့လိုအပ်သလဲ ?
ရောဂါတစ်ခုခုကို ဆေးကုသဖို့ အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သန့်စင်ဆေးကြောဆေးရည်ကို လိုအပ်သလို ရွေးချယ်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ် ။ ရေရှည်တော့မသင့်တော်ပါဘူး ။ မိန်းမကိုယ်ဟာ ပိုးမွှားဝင်ပြီး PH မျှ ခြေ ပျက်နေ မယ် အနံ့တွေဘာတွေဆိုးရွားစွာ နံနေမယ်ဆိုရင်တော့ PH Level5အဆင့်ရှိတဲ့ ပါဝင်တဲ့ မိန်းမကိုယ် သန့် စင်ဆေးကြောရည်တွေကို ရွေးချယ်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ် ။ ကဲဒါဆိုရင် မိန်းမကိုယ်မှ ထွက်တဲ့အရည် Vaginal discharge အကြောင်းကို အနည်းငယ်လေ့လာကြည့်ရအောင် ။ မျိုးပွားနိုင်တဲ့အသက် အရွယ်တွေဖြစ် တဲ့ အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်အတွင်းမှာ ပုံမှန် မိန်းမကိုယ်ထဲက vaginal discharge တွေဆင်းလေ့ရှိပါတယ် ။ ပမာဏ ၊ အရောင် ပါဝင်မှုနဲ့ အနံ့ တွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာတော့ ဒါဟာ ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါပြီ ။ ဒီလိုပြောင်း လဲခြင်းဟာ internal factors တွေဖြစ်တဲ့ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်း ၊ စိတ်ဖိစီးမှု များခြင်း စ တာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို external factors တွေဖြစ်တဲ့ ပိုးဝင်ခြင်း ၊ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု အားနည်းခြင်း စတာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
မိန်းမကိုယ်ထဲမှ ထွက်တဲ့အရည်ဟာ အစိမ်းရောင်ဖက်သမ်းနေပြီး အနံဆိုးတွေလည်းရှီမယ် ပမာဏကလည်း နည်းလိုက်များ လိုက်ဖြစ်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ vaginitis လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ Vaginal Discharge ရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့
- ဆီးသွားစဉ် နာကျင်ခြင်း ပူခြင်း
- ကြွက်နို့ကဲ့သို့ အဖုလေးများပေါက်ခြင်း
- ရာသီမဟုတ်သော မူမမှန်သွေးဆင်းခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
မိန်းမကိုယ်ထဲ ပိုးမ၀င်အောင် အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာခြင်းအားဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ။
၁ ။ သင်ဟာ diaphragm လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံး ၊ သုတ်ပိုးသတ်သော ဆပ်ပြာသို့မဟုတ် ဂျယ်လီ ဒါမှမဟုတ် ကွန်ဒုံး တစ်ခုခု သုံးစွဲတဲ့အတွက် မိန်းမကိုယ်ထဲ ခဏခဏပိုးဝင်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ဆရာဝန် နဲ့တိုင်ပင်ပြီး သားဆက်ခြားနည်းလမ်း Birth control options တွေကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့ လိုနေပါပြီ ။
၂ ။ အိမ်သာတက်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းဆေးကြောတဲ့အခါ အရှေ့မှ အနောက်သို့သာ ဆေးကြောပါ ။ သို့မှသာ စအိုအတွင်းမှ ပိုးမွှားများ မိန်းမကိုယ်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခြင်းကို တားဆီးပေးနိုင်မှာပါ ။
၃ ။ မိန်းမကိုယ်တစ်ဝှိုက်ကို ရေသန့် သို့မဟုတ် အနံ့မပါတဲ့ ဆပ်ပြာပျော့ပျော့နဲ့ တစ်နေ တစ်ကြိမ်လောက်ဆေးကြောပေး ဖို့လိုပါတယ် ။ ရေချိုးခန်းသုံးဆပ်ပြာမသုံးပါနဲ့ ။ သေချာဆေး ကြောပြီး ခြောက်သွေ့ အောင် သုတ်ပါ ။
၄ ။ သွေးဆင်းချိန်ကာလအတွင်း မှာ tempons ကို တစ်နေ့ သုံးကြိမ်အနည်းဆုံးလဲပါ ။ သင့်ရဲ့ ကာလပြီး ဆုံးသွားရင် နောက်ဆုံးအသုံးပြုတဲ့ tampon ကို စွန့်ပစ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ ။
၅ ။ တင်းကျပ် တဲ့အ၀တ်အစားတွေကို ၀တ်ခြင်းကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ပါ ။ cotton underwear ကို သာဝတ် ဆင်ပါ ။ Cotton underwear နဲ့ ချောင်ချိတဲ့ အ၀တ်အစားတွေဟာ သင့်ရဲ့ မိန်းမကိုယ်နေရာကို yeast cell တွေ ကြီးထွားခိုအောင်းစေတဲ့ ပူနွေးစွတ်စိုခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးပေးပါတယ် ။ အကျပ်တွေ ၀တ်ဆင်ခြင်း ဟာလည်း အရေပြားကို မသက်မသာဖြစ်စေပြီး rash တွေထွက်ပေါ်စေပါတယ် ။
၆ ။ စပရေးတွေနဲ့တခြားအမွှေးနံ့တွေပါတဲ့ အရာတွေကို သုံးစွဲခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ ။ ဒါတွေဟာ အရေပြားမှာ irritation ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အလာ့ဂျစ် (ဓါတ်မတည့်ခြင်း )တွေဖြစ်စေပါတယ် ။
၇ ။ သင်ဟာ လိင်ဆက်ဆံမှုများတဲ့ multiple sex partners ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ကွန်ဒုံးလည်းမသုံးဘူးဆိုရင် STD လို့ခေါ်တဲ့ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ မိန်းမကိုယ် ထဲပိုးဝင်ဖို့ လည်းလွယ်ကူပါတယ် ။
၈ ။ အမျိုးသားနဲ့အတူနေပြီးတဲ့အခါမှာလည်း ဆီးသွားပါ ။ ပြီးတဲ့အခါမိန်းမ ကိုယ်နေရာကို ရေအေးအေး နဲ့ ဆေးကြောပေးဖို့လိုပါတယ် ။
၉ ။ စက်ဘီးစီးခြင်း ၊ မြင်းစီးခြင်းစတာတွေဟာ မိန်းမကိုယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက် အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ပြုလုပ် သင့်ပါတယ် ။
၁၀ ။ သင့်မှာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိတယ်ဆိုရင်လည်း သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ကောင်းစွာ ထိမ်းထား ဖို့လို ပါတယ် ။
လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တောပိုးသောက်ဆေးသောက်သင့်ပြီး မလိုအပ်ပဲ ပိုးသတ်ဆေးသောက် ခြင်းကို ရှောင်ရှား ရပါမယ် ။ ဆရာဝန်နဲ့သေချာပြသပြီး သင့်ရဲ့ရောဂါရာဇ၀င်က အစ သေချာစမ်းသပ်စစ်ဆေးကာ ကုသမှု ခံယူဖို့လို အပ်ပါတယ် ။
ွRef : http://vaginal-health.50webs.com/
Vaginal cleaning Fluid in Internet
Labels: Family health, Health care, health education, Hygiene
နို့ဆိုရင် လူအများစု သိကြပြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ကတည်းက အာ ဟာ ရဓါတ်ပြည့်ဝအောင် မိခင်နို့ရည်ကို စို့ခဲ့ကြရတယ် ။ အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်း အာဟာရ အလို့ ငှာ နွားနို့ ဆိတ်နို့ စသဖြင့် အမျိုးအမျိုးသောက်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ် ။ နို့ရည်ရဲ့အကြောင်းကို အသေး စိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင် ။
နို့ရည်ဟာ Mammals လို့ခေါ်တဲ့ နို့တိုက်သတ္တ၀ါတွေရဲ့ mammany glands ခေါ် နို့ ရည်ထွက်သော ဂလင်းမှ ရရှိတဲ့ အဖြူရောင်အရည်တွေဖြစ်ပါတယ် ။ လူအပါအ၀င် ငယ်ရွယ်တဲ့နို့တိုက်သတ္တ၀ါတွေအတွက် အစားအ စာတွေကို မချေဖျက်နိုင်သေးခင်မှာ နို့ဟာ မူရင်းပင်မ အာဟာ ရ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပထမဆုံးထွက်တဲ့ နို့ရည်ကြည်ကို clolostrum လို့ခေါ်ပြီး အဲဒီ နို့ဦးရည်ကြည်မှာ မိခင်ရဲ့ antibodies (ရောဂါပိုးမွှားများကိုတိုက်ထုတ်နိုင်သော အရာ) တွေ ကို ကလေးငယ်တွေဆီ သယ်ဆောင်ပေးပါတယ် ။ နို့ဦးရည်ဟာ ကလေး ငယ်ကို ရောဂါ မျိုးစုံကူး စက်ခြင်းမှ လည်း ကာကွယ်တားဆီးပေးပါတယ် ။ နို့တိုက်သတ္တ၀ါတွေ ရဲ့မျိုးစိတ်အမျိုးအမျိုး ကွာခြားချက်ရယ် တခြား အကြောင်း အချက်များစွာကြောင့် နို့ရည်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အဆီ ၊ ပရိုတိန်းနဲ့ ကယ်စီယမ် စတာတွေ ရဲ့ ပါဝင်မှု ပမာဏကလည်း ကွာခြားလေ့ရှိပါတယ် ။ နွားနို့မှာဆိုရင် PH 6.4 ကနေပြီး 6.8 အတွင်းပါဝင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အက်ဆစ်ဓါတ်ဖက်ကိုရောက်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ ။
နို့ရည်သောက်သုံးခြင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ် ။ ငယ်ရွယ်တဲ့ သူတွေအတွက်မိခင်မှတဆင့် အာဟာ ရပြည့်ဝတဲ့နို့ ရည်သောက်သုံးခြင်းနဲ့ တခြား သတ္တ၀ါတွေကနေရတဲ့ နို့တွေကို လူအသက်ရွယ်မျိုးစုံအတွက် အထူးထုတ် လုပ်ထား တဲ့ နို့ ထုတ်ကုန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။ နို့တိုက်သတ္တ၀ါ အများစုမှာတော့ နို့ကို နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်းမှတဆင့် ကလေးတွေ ကို အာဟာရပေးပါတယ် ။ ပထမတစ်မျိုးက တိုက်ရိုက် တိုက်ကျွေးခြင်းဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ် မျိုးကတော့နို့ကို ညှစ်ထုတ်ပြီးမှ နောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ကျွေးခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အချို့ နိုင် ငံတွေ မှာဆို ရင် ရေမြေသဘာဝအရရော ယခုအချိန်ထိ မိခင်တွေဟာ ကလေး အသက် ၇ နှစ်အရွယ်ထိ မိခင်နို့ကို တိုက်ကျွေးနေ ကြဆဲဖြစ်ပါတယ် ။ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ လူတွေဟာ ကလေးအရွယ်ကျော်လွန်ပြီးလည်းပဲ တခြား သတ္တ ၀ါတွေ ( နွား ၊ ဆိတ် ၊ သိုး ) က ရတဲ့နို့တွေကို သောက်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ် ။ နွားနို့ကို စားသောက် ကုန်အဖြစ် ကရင်မ် ၊ ထောပတ် ၊ ဒိန်ချဉ် ၊ ရေခဲမုန့် စသဖြင့် အမျိုးမျိုး ထည့်သွင်းပြောင်း လဲပြုလုပ် လာကြပြီဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာ အရသာလည်းပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ သယ်ဆောင်ရလည်းလွယ်ကူတဲ့ cheese ကို ထုတ်လုပ်လာကြပါတယ် ။ ယခုနောက်ပိုင်း စက်ရုံတွေကတော့ နို့ကိုအသုံးပြုပြီး casein , whey ပရိုတိန်း ၊ လက်ကျူလို့စ် ၊ condensed milk နဲ့ နှို့မှုန့်တွေအထိပါထုတ်လုပ်လာကြပြီး အစားအသောက်တွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ အနေနဲ့ပါ သုံးစွဲလာကြပါတယ် ။
မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေမှာ တခါတရံ လတ်ဆတ်တဲ့ ဆိတ်နို့ရည်ကိုလည်းတိုက်ကျွေးလေ့ရှိကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လည်းလက်တွေ့မှာတော့ အန္တရာယ်များပါတယ် ။ ကလေးငယ်တွေမှာ အလက်ထရိုလိုက် မညီမျှခြင်း ( electrolyte imbalances ) , metabolic acidosis , သွေးအားနည်းရောဂါတစ်မျိုး ( megaloblastic anaemia ) နဲ့ အလာ့ဂျစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ။ လူတွေမှာ နို့ရည်နဲ့မတည့်တဲ့ lactose intolerance လို့ခေါ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို 5% လောက်မှာတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အာဖရိကနဲ့ အာရှမှာ အဖြစ်များ ပါတယ် ။ လက်တို့စ် lactose ဟာ နို့ ၊ forsythia ပန်းနဲ့ အပူပိုင်းဒေ သ စေး ပျစ်သောအစေး ထွက်တဲ့ချုံတစ်မျိုး မှာပဲ တွေ့ရတဲ့ သကြားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် ။ Lactose ကို ချေဖျက် ဖို့အတွက် lactase လို့ခေါ်တဲ့ သကြားတစ်မျိုးလိုအပ်ပါတယ် ။ မွေးပြီးတဲ့အခါ small intestine လို့ခေါ်တဲ့ အူသေးထဲမှာ lactase အင်ဇိုင်း ဟာ အမြင့်ဆုံးကို ရောက်ရှိလာပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ နို့ကို ပုံမှန် မသောက်သုံးတဲ့အခါမှာ lactase အင် ဇိုင်းတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာပါတယ် ။ အခြားတစ်ဖက်မှာ လည်း မိခင်နို့မ တိုက်ကျွေး တဲ့ လူတွေဟာ နွားနို့ အပြင်တခြား သိုး ၊ ဆိတ် ၊ တိဗက်နွား ၊ ရေမြင်း ၊ မြင်း ၊ တန်ဒြာဒေသ သမင်နဲ့ ကုလား အုတ်စတဲ့သတ္တ၀ါတွေက နို့ကို တိုက်ကျွေးတာကို တွေ့ရှိရပါတယ် ။ ကျွဲနို့နဲ့ ကျွဲရိုင်းတွေရရှိတဲ့နို့ကို ကမ္ဘာပေါ် မှာအများဆုံးတိုက်ကျွေးတဲ့ နိုင်ငံကတော့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကတော့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ နွားနို့နဲ့ နွားနို့ ထုတ်ကုန်တွေကို အများဆုံးသုံးစွဲတဲ့ နိုင်ငံ ဆယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Top ten per capita cow's milk and cow's milk products consumers in 2006
Finland 183.9 19.1 5.3
Sweden 145.5 18.5 1.0
Ireland 129.8 10.5 2.9
Netherlands 122.9 20.4 3.3
Norway 116.7 16.0 4.3
Spain 119.1 9.6 1.0
Switzerland 112.5 22.2 5.6
United Kingdom 111.2 12.2 3.7
Australia 106.3 11.7 3.7
Canada 94.7 12.2 3.3
နို့ရည်ထုတ်တဲ့ mammary gland ဟာ apocrine အရေပြား ကလမ်း(န်) တွေကနေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် ။ Mammary gland တွေရဲ့ အဓိကတာဝန်ကတော့ lactation ဆိုတဲ့ နို့ရည်ထုတ်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ။ နို့ရည်ရဲ့ မူရင်းဂုဏ် သတ္တိဟာ အာဟာ ရဓါတ်လုံလောက်ပြည့်ဝစွာပေးဖို့အပြင် ကိုယ်ခံအား စနစ်မြင့် တက်စေပြီး ရော ဂါပိုး မွှားတွေကို ကာကွယ်တိုက်ထုတ်နိုင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ နေ့စဉ်သောက် သုံးလေ့ရှိ တဲ့ နွားနို့ ၁၀၀ ဂရမ်မှာတော့ အောက်ပါ အတိုင်းအချိုးအဆများပါဝင်ပါတယ် ။
အာဟာ ရတန်ဖိုး = ၃.၅ အောင်စ
အင်နာဂျီ = 60 kcal 250 kJ
ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် = ၅.၂ ဂရမ်
သကြား = ၅.၂ ဂရမ်
လက်ကျူလို့စ် = ၅.၂ ဂရမ်
အဆီ = ၃.၂၅ ဂရမ်
- saturated = 1.9 g
- monounsaturated = 0.8 g
- polyunsaturated = 0.2 g
ပရိုတိန်း = 3.2 g
ရေ = 88 g
Vitamin A = 28 μg 3%
Thiamin (Vit. B1) = 0.04 mg 3%
Riboflavin (Vit. B2) = 0.18 mg 12%
Vitamin B12 = 0.44 μg 18%
Vitamin D = 40 IU 20%
Calcium = 113 mg 11%
Magnesium =10 mg 3%
Potassium = 143 mg 3% စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါဟာ နွားနို့ ၁၀၀ ဂရမ်မှာပါဝင်တဲ့ အာဟာ တန်ဖိုးတွေဖြစ် ပါတယ် ။ နွားနို့ တစ်ခွက်မှာ ၁၂၅ ကီလိုရီပါဝင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်သင်ဟာ တစ်နေ့ကို နွားနို့ နှစ်ခွက်သောက်ရင် ၂၅၀ ကီလိုရီရရှိပြီးတစ်ပတ်မှာ ၁၇၅၀ ကီလိုရီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဆီ တစ်ပေါင်မှာ ၃၅၀၀ ကီလိုရီ ပါဝင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် နွားနို့ ၂ ခွက်နေ့စဉ်သောက်ရင် တစ်ပတ်မှာ ပေါင်ဝက်စီ တိုးတယ်လို့ ဆိုပါ တယ် ။ ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ နွားနို့နဲ့လူနို့ရဲ့ကွာခြားချက်အကြောင်းလေးလည်းလေ့လာကြည့်ရအောင် ။
တကယ်တော့ မိခင်နို့ရည်နဲ့ နွားနို့ ရည်မှာ ကွာခြားချက်များစွာရှိပါတယ် ။ နွားနို့ကို ကလေးငယ် ၁၁ လမှ သည် ၁ နှစ် အထိ ကလေး ငယ်တွေကို တိုက်ကျွေးခွင့်မရှိပါဘူး ။ ဒီထက်အသက်ကြီးလာရင်လည်း ဆရာဝန်ညွှန်နဲ့ တိုင်ပင် ဖို့ လို ပါတယ် ။ နွားနို့ဟာ ကလေးငယ်တွေရဲ့ အစာအိမ်အစာချေဖျက်မှုစနစ်ကို ပိုမို ခက်ခဲစေပြီး အာဟာ ရတန်ဖိုး မှာလည်း မိခင်နို့နဲ့မတူညီပါဘူး ။
၁ ။ Antibodies
မိခင်နို့ရည်မှထွက်ရှိတဲ့ သဘာဝ ပိုးမွှားကာကွယ်ပေးသော အရာ antibodies တွေဟာကလေးငယ်တွေကို ကိုယ်ခံအားတက်စေပြီးကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဗိုင်းရပ်နဲ့တခြားဘက်တီး ရီးယား တွေကိုလည်း ကာကွယ် တိုက်ထုတ်ပေးပါတယ် ။ သင့်ကလေးဟာ ဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် ဘတ်တီးရီးယားကြောင့် ဖျားနာနေပြီ ဆိုရင်မိခင်နို့ရည်မှာ ဒီ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ antibodies တွေပေါ်ထွက်လာပြီး ဗိုင်းရပ်တွေ ဘတ်တီးရီး ယားတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးပါတယ် ။ Formula ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ် ။ တိုက်နိုင်သလောက် တိုက်ပါ အချိန်တိုင်းတိုက်နိုင်ပါတယ် ။ နွားနို့မှာတော့ ဒီလိုမျိုး သဘာဝ Antibodies တွေ မပါရှိပါဘူး ။ ထုတ်လည်းမ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါဘူး ။
၂ ။ Water
မိခင်နို့ရည်မှာလုံလောက်တဲ့ ရေပါဝင်ပြီး ကလေးငယ်ကို ရေဆာခြင်းမှ ကင်းဝေးစေဆပါတယ် ။ ကလေးငယ်လို အပ်သလောက်လဲ မိခင်နို့ရည်က ချိန်ညှိပေးပါတယ် ။ နွားနို့မှာပါဝင် တဲ့ရေပမာဏဟာ ကလေးငယ်လိုအပ် သလောက် ချိန်ညှိမပေးနိုင်ပါဘူး ။
၃ ။ Fat
မိခင်နို့ရည်မှာ နွားနို့ထက် အဆီများစွာပါဝင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်ကလေးငယ်ကလည်းပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ပါတယ် ။ ဒါဟာ ဘာလို့ နို့စို့ ကလေးငယ်တွေဟာ နို့ဘူးတိုက်တဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ မစင် stool ကွာရသလဲ ဆိုတဲ့အဖြေ တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ နွားနို့ထဲမှာပါဝင်တဲ့အဆီကိုတော့ ကလေးငယ်က လွယ်ကူစွာ စုပ်ယူနိုင်ခြင်းမ ရှိပါဘူး။
၄ ။ Protein
မိခင်နို့ရည်မှ ပရိုတိန်းဓါတ်ဟာ ကလေးငယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြီးထွားစေပြီး နွားနို့မှ ပရိုတိန်းကတော့ မိခင်နို့မှာ ပါတဲ့ပရိုတိန်းထက် ၂ ဆလောက်ပိုများပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျေဖျက်မှုနည်းပါတယ် ။
၅ ။ Carbohydrates
မိခင်နို့ရည်မှာ နွားနို့ထက် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များ စွာပါဝင်ပါတယ် ။ စွမ်းအင် အင်နာဂျီထုတ် ဖို့အတွက် အကောင်း ဆုံး ပင်ရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
၆ ။ Vitamins and minerals
အကယ်၍ မိခင်ကသာ သင့်တဲ့မျှတ ၊ ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့အာဟာ ရပြည့်ဝတဲ့အစားစာကို စားသောက်နေ မယ်ဆိုရင် ကလေးငယ်အတွက် လုံလောက်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေကို ကလေးငယ် ၆ လအ၇ွယ်ထိ မိခင်နို့ရည် ကနေတဆင့် ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ နွားနို့မှာတော့ မိခင်နို့ထက် ပါဝင်မှုနည်းပြီး ကလေးငယ်တွေ အတွက် မှန်ကန်သင့်တော်တဲ့ ပမာဏမဟုတ်ပါဘူး ။
၇ ။ Taste
အရသာကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း မိခင်စားသောက်တဲ့ အစားအသောက်ပေါ် မူတည်ပြီး နို့ရည်ရဲ့ အရ သာဟာ ပြောင်း လဲနေမှာဖြစ်ပါတယ် ။ Formula လို့ခေါ်တဲ့ မိခင်အစားထိုးနို့မှုန့်တွေမှာ မိခင်နို့မှာ မပါဝင်တဲ့ DHA လိုမျိုးဒြပ်ပေါင်းတွေကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း Formula ဟာ မိခင်နို့မ ရရှိမှပဲ အစားထိုးဖို့အတွက် သုံးစွဲသင့်ပါတယ် ။
Ref : http://en.wikipedia.org/wiki/Milk
Labels: Breastfeeding, Family health, health education, Milk, Reproductive Health မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာ